June 2010 | " မနာပဒါယီ "
။ အချိန် 6/29/2010 10:16:00 AM
Q. ဆရာတော်ဘုရားအား ရိုသေစွာလျောက်ထားပါတယ် ဘုရား။ ကျွန်တော်က နည်းပညာ တက်ရောက် သင်ကြားနေသော ဗိုလ်လောင်းတစ်ဦးပါ။ ရဟန္တာနဲ့ ပစ္စေကဗုဒ္ဓ ကွာခြားပုံကို တပည့်တော်အား ဖြေကြား ပေးပါခင်ဗျာ။ မည်သို့ မည်ပုံ ကြိုးစားအားထုတ်သော် ဖြစ်နိုင်ပုံတို့ကို ရှင်းလင်းဖြေကြားပေးပါရန် လေးစားစွာ ပန်ကြားအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
တပည့်တော်က အရှင်ဘုရားရဲ့ စာဖတ်ပရိသတ် တစ်ဦးပါ။ အရှင်ဘုရား စာအုပ်တွေကို အားလုံးနီးပါး ဖတ်ဖြစ်ပါတယ်။ လိ်ုက်နာရမှာတွေကိုလည်း လိုက်နာပါတယ်။ မှတ်သားကျင့်ကြံရမှာတွေကိုလည်း လိုက်နာ ပါတယ်။ အတုယူစရာတွေကိုလည်း အတုယူပါတယ်။ တပည့်တော် တရားအား ထုတ်ချင်ပေမယ့် အခြေအနေက မပေးသေးလို့ စာသင်ရင်း တရားစာအုပ်တွေဖတ်ရင်း ၀ိပဿနာကိုလည်း ကျင့်ကြံနေပါတယ်။ တပည့်တော်မှာ အလွန်ထက်သန်တဲ့ စိတ်တစ်ခုရှိပါတယ်ဘုရား။ အဲဒါကတော့ တပည့်တော် အဘိညာဉ် (၆) ပါးနဲ့တကွ ရဟန္တာဖြစ်ချင် နေမိတယ်ဘုရား။ တပည့်တော် အတတ်နိုင်ဆုံး တရားစာအုပ်တွေဖတ် လေ့လာတယ်။ သူငယ်ချင်းတွေကိုလည်း ဟောပြောပါတယ်။ အရှင်ဘုရားကြောင့် တပည့်တော် အများကြီး ပြောင်းလဲခဲ့ပါတယ်။ တပည့်တော် မနက်တိုင်း ဘုရား ဆွမ်းကပ်တယ်ဘုရား။ နေ့ခင်းလည်း ဘုရား ဆွမ်းကပ်ပြီးမှ စားပါတယ်ဘုရား။ အဲဒီကုသိုလ်ရဲ့ ပထမဇောက ယခု တပည့်တော် ဘယ်သွားသွား ဘယ်နေရာရောက်ရောက် ထမင်းကျွေးမယ့် လူတွေအမြဲရှိနေတယ်ဘုရား။ စေတနာပါပါနဲ့ နေ့တိုင်းကျွန်တော့်ကို ကျွေးကြတယ်ဘုရား။ ယခု ဘယ်သွားသွား သရဏဂုံ ၃ ပါး အမြဲရွတ်နေပါတယ်ဘုရား။
အရှင်ဘုရား ရိုသေစွာ ကန်တော့ပါတယ်ဘုရား။
ဗိုလ်လောင်း ဝေဇင်မင်း (DSTA)
A. မင်္ဂလာပါ ဒကာဝေဇင်မင်း
ဗုဒ္ဓဘာသာကို လက်တွေ့လိုက်နာ ကျင့်ကြံနေထိုင်တာကို သိရတဲ့အတွက် ၀မ်းသာပါတယ်။ တရားတော်ရဲ့ ဂုဏ်တော်ထဲကလို လက်တွေ့အားထုတ်ရင် လက်တွေ့အကျိုး ရနိုင်တာဖြစ်လို့ အားထုတ်နေတဲ့ သူတွေအတွက် အကျိုးတရားကတော့ ရှိနေမှာ အမှန်ပါပဲ။ အခု ဒကာလေး သိချင်နေတဲ့ မေးခွန်းတွေကို အတတ်နိုင်ဆုံး အကျဉ်းချုံ့ပြီးပဲ ဖြေကြားပေးလိုက်ပါတယ်။ အသေးစိပ် အကျယ်ဖြေပေးမယ်ဆိုရင် စာတွေအရမ်းများပြီး ရှုတ်ထွေးသွားမှာ စိုးလို့ပါ။
ဒကာလေးမေးထားတဲ့ ရဟန္တာနဲ့ ပစ္စေကဗုဒ္ဓ ကွားခြားချက်ကတော့ ရဟန္တာဆိုတာ အရဟန္တဆိုတဲ့ ပါဠိစကားကို မြန်မာမှုပြုထားတာဖြစ်ပြီး ပစ္စေကဗုဒ္ဓဆိုတာက ပါဠိစကားလုံးကို တိုက်ရိုက်အသုံးပြုထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အရဟန္တဆိုတဲ့ စကားမှာပါတဲ့ အရ, ဆိုတဲ့စကားက အဟန့်အတား အကန့်အထောက် ကိလေသာလို့ အဓိပ္ပါယ်ရပြီး ဟန္တ(ဟတ)ကတော့ သတ်ခြင်းလို့ အဓိပ္ပါယ်ရပါတယ်။ ဒါကြောင့် အရဟန္တ (ရဟန္တာ)ဆိုတာ တားမြစ်ပိတ်ပင်တတ်တဲ့ ကိလေသာမှန်သမျှကို အကြွင်းအကျန်မရှိ အကုန်အစင် သတ်ပြီးသွားတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ကို ခေါ်ဆိုတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပစ္စေကဗုဒ္ဓဆိုတဲ့ စကားလုံးမှာပါတဲ့ ပစ္စေကဆိုတာ = အသီးအခြား၊ သီးသီးသန့်သန့် လို့အဓိပ္ပါယ်ရပြီး ဗုဒ္ဓကတော့ သစ္စာလေးပါးကို သိသောဘုရားလို့ အဓိပ္ပါယ်ရပါတယ်။ ဒါကြောင့် ပစ္စေကဗုဒ္ဓဆိုတာ သာဝကများလို သဗ္ဗညုဘုရားရှင်ထံမှ တစ်ဆင့် သစ္စာလေးပါးကို သိတဲ့ ရဟန္တာမျိုးမဟုတ်ဘဲ သီးခြားမိမိကိုယ်တိုင် ကျင့်ကြံအားထုတ်ပြီး သစ္စာလေးပါးကိုသိတဲ့ ဘုရားမျိုးကိုခေါ်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ချို့က ပစ္စေကဗုဒ္ဓဟာ ဘုရားတော့ဘုရားပဲ ဒါပေမယ့် ဘုရားငယ်လို့ ဆိုလေ့ရှိပါတယ်။ ဒါက ရဟန္တာနဲ့ ပစ္စေကဗုဒ္ဓဆိုတဲ့ အခေါ်အဝေါ်စကားလုံးတွေရဲ့ အဓိကအဓိပ္ပါယ်ခြားနားချက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ရဟန္တာနဲ့ ပစ္စေကဗုဒ္ဓတို့ဟာ သစ္စာလေးပါးကိုသိပြီး ကိလေသာမှန်သမျှကို အကုန်အစင် ပယ်သတ်ကာ နောက်ဆုံးတွင် နိဗ္ဗာန်ကို မျက်မှောက်ပြုသွားကြတာချင်း တူညီကြပေမယ့် ဖြည့်ကျင့်ရတဲ့ ပါရမီနဲ့ ရရှိတဲ့ အဆင့်အခြေအနေ၊ လုပ်ဆောင်ချက်တွေကတော့ ကွာခြားကြပါတယ်။ သစ္စာကို သိမြင်ကြတာချင်း ကွာခြားမှုရှိတာကို ဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒါကို စာလိုပြောတော့ ဗောဓိလို့ ပြောပါတယ်။ ဗောဓိဆိုတာ သစ္စာလေးပါးကို ထိုးထွင်း၍ သိမြင်တဲ့ဉာဏ်ကို ဆိုပါတယ်။ ဒါကြောင့် သာဝကတွေရဲ့ သိမြင်မှုဉာဏ်ကို သာဝကဗောဓိလို့ဆိုပြီး ပစ္စေကဗုဒ္ဓများရဲ့ ထိုးထွင်းသိမြင်မှုဉာဏ်ကို ပစ္စေကဗောဓိလို့ ဆိုပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ ပစ္စေကဗုဒ္ဓလည်း ရဟန္တာပဲ ရဟန္တာလည်း ရဟန္တာပဲလို့ စောဒကတက်စရာ ရှိပါတယ်။ ရဟန္တာတော့ ရဟန္တာပါပဲ။ ရရှိတဲ့ ဉာဏ်နဲ့ဖြည့်ကျင့်တဲ့ ပါရမီတွေကိုလိုက်ပြီး သဗ္ဗညုတဗုဒ္ဓ၊ ပစ္စေကဗုဒ္ဓ၊ သာဝကဗုဒ္ဓရယ်လို့ ခွဲခြားသတ်မှတ်ကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ အသုံးပြုတဲ့ ရဟန္တာဆိုတာကတော့ သာဝကတွေကို ရည်ရွယ်ပါတယ်။ သာဝကအဖြစ်နဲ့ ပါရမီဖြည့်ပြီး ကိလေသာကုန်ခမ်းကာ နိဗ္ဗာန်ဝင်စံကြတဲ့ ရဟန္တာများကို ဆိုလိုပါတယ်။ သာဝကတွေ ရရှိကြတဲ့ ဗောဓိတွေကို ဆိုလိုချင်ပါတယ်။
ဒီသာဝက ဗောဓိကလည်း သုံးမျိုးသုံးစား ကွဲပြားပြန်ပါတယ်။ အဲဒီသုံးမျိုးက
(၁) အဂ္ဂသာဝကဗောဓိ = အရှင်သာရိပုတ္တရာ၊ အရှင်မဟာမောဂ္ဂလာန် မထေရ်မြတ်တို့ ရရှိကြတဲ့ ဗောဓိမျိုးကို အဂ္ဂသာဝကဗောဓိလို့ ခေါ်ပါတယ်။ ဒီဗောဓိဉာဏ်ကို ရဖို့အတွက် ဒါနစတဲ့ ပါရမီဆယ်ပါးကို ကမ္ဘာပေါင်း တစ်သင်္ချေနဲ့ ကမ္ဘာတစ်သိန်းကြာအောင် ပါရမီဖြည့်ကျင့်ရပါတယ်။
(၂) မဟာသာဝကဗောဓိ = မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ လက်ျာတော်ရံ သာဝက လေးဆယ်၊ လက်ဝဲတော်ရံ သာဝကလေးဆယ်လို့ ခေါ်တဲ့ အသီတိရှစ်ကျိပ်ဖြစ်တဲ့ မဟာသာဝကများ ရရှိတဲ့ ဗောဓိကို မဟာသာဝက ဗောဓိလို့ ခေါ်ပါတယ်။ ဒီဗောဓိဉာဏ်ကို ရဖို့အတွက်လည်း ဒါနစတဲ့ ပါရမီဆယ်ပါးကို ကမ္ဘာတစ်သိန်း ကာလကြာအောင် ပါရမီဖြည့်ကျင့်ရပါတယ်။
(၃) ပကတိသာဝကဗောဓိ = ပကတိသာဝကများအတွက် ပါရမီဖြည့်ကျင့်ရမယ့် ကာလအပိုင်းအခြား သတ်မှတ်ချက်ကို အတိအကျ မဖော်ပြထားပါဘူး။ တစ်ချို့ အဋ္ဌကထာများမှာတော့ ကမ္ဘာတစ်သိန်းအောက် ကမ္ဘာတစ်ရာ၊ ကမ္ဘာတစ်ထောင် စသဖြင့် အတိအကျ သတ်မှချက်မရှိ ဒါနစတဲ့ပါရမီများ ဖြည့်ကျင့်ရဖွယ်ရှိတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ဒီနေရာမှာ ဒီနေ့ခေတ် တရားအားထုတ်နေသူများ အနေဖြင့် မိမိတို့ဟာ ဆုကြီးပန်များ ဟုတ်ချင်လည်းဟုတ်နိုင်၊ မဟုတ်ချင်လည်း မဟုတ်နိုင်ပေမယ့် သာမန်ဗောဓိဉာဏ်ကို ရပြီး သစ္စာလေးကိုသိကာ ရဟန္တာဖြစ်ဖို့အတွက် အတိတ်ဘ၀တွေက ဖြည့်ကျင့်ခဲ့တဲ့ ပါရမီများလည်း ရှိနိုင်တဲ့အတွက် ဒီဘ၀မှာ ကြိုးစားအားထုတ်ရင် ရဟန္တာအဖြစ် ရနိုင်ပါတယ်။ သေချာတာကတော့ အတိတ်ဘ၀တွေက ဘယ်လိုဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာ မသိနိုင်ပေမယ့် ဒီဘ၀မှာ ကြိုးကြိုးစားစား မှန်မှန်ကန်ကန် ပြင်းပြထက်သန်တဲ့ အားထုတ်မှုများနဲ့ ကျင့်ကြံမယ်ဆိုရင် ရဟန္တာဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မသိနိုင်တဲ့ ပါရမီတွေကလည်း ရှိချင်ရှိနေနိုင်မှာ ဖြစ်လို့ပါ။
ရဟန္တာအဖြစ်ကို ရရှိတဲ့အခါမှာလည်း ကြိုးစားအားထုတ်မှုနဲ့ ပါရမီတွေအရ ဈာန်အဘိညာဏ် တန်ခိုးမရှိ ပကတိ သူလိုငါလို နေတဲ့ သုက္ခ၀ိပဿက ရဟန္တာနှင့် ဈာန်အဘိညာဏ်၊ တန်ခိုးရှင်ဖြစ်တဲ့ ဈာနလာဘီရဟန္တာလို့ နှစ်မျိုးနှစ်စားခွဲခြားနိုင်ပါတယ်။ ပိုပြီး အသေးစိပ်ခွဲခြားမယ်ဆိုရင်တော့ ၁။ လွန်ကဲသော သဒ္ဓါဖြင့် ကိလေသာမှ လွတ်ကင်းသော သဒ္ဓါဝိမုတ္တရဟန္တာ ၂။ လွန်ကဲသော ပညာဖြင့် ကိလေသာမှ လွတ်ကင်းသော ပညာဝိမုတ္တရဟန္တာ ၃။ လောကီဝိဇ္ဇာ အဘိညာဏ်မပါ သဒ္ဓါပညာနှစ်ပါးဖြင့်သာ ကိလေသာမှ လွတ်ကင်းသော ဥဘတောဘာဂ ၀ိမုတ္တရဟန္တာ ၄။ ၀ိဇ္ဇာသုံးပါးနှင့်ပြည့်စုံသော တေ၀ိဇ္ဇာပတ္တရဟန္တာ ၅။ အဘိညာဉ် (၆)ပါးနဲ့ပြည့်စုံသော ဆဠာဘိညရဟန္တာ ၆။ ပဋိသမ္ဘိဒါလေးပါးသို့ ဆိုက်ရောက်သော ပဋိသမ္ဘိဒါပတ္တ ရဟန္တာလို့ (၆)မျိုးခွဲခြားနိုင်ပါတယ်။ ဒီကွဲပြားမှုတွေဟာ အားထုတ်တဲ့ နည်းစနစ်နဲ့ လိုချင်တဲ့အရာကို အထပ်ထပ်ကျင့်ကြံ ပွားများမှုတွေကိုလိုက်ပြီး အမည်နဲ့ အဆင့်ကွဲပြားသွားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အားလုံးကတော့ အာသဝေါကုန်ခမ်း ရဟန္တာများပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
မေးခွန်းရှင် ဒကာလေး ဖြစ်ချင်တဲ့ အဘိညာဏ်ခြောက်ပါးနဲ့ ပြည့်စုံတဲ့ ရဟန္တာအဖြစ်ကို ရချင်ရင် ၀ိပဿနာအလုပ်ကို နည်းစနစ်မှန်ကန်စွာ ကြိုးစားအားထုတ်ရင်း အဘိညာဏ် ရဖို့အတွက် ပထမဈာန်၊ ဒုတိယဈာန် စတဲ့ဈာန်များကို ၀သီဘော်ငါးပါးနဲ့ နိုင်နင်းစွာပွားများ အားထုတ်နိုင်မယ် ဆိုရင်တော့ ဆဠာဘိည ရဟန္တာအဖြစ်ကို ရရှိနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဘိညာဏ်ခြောက်ပါးထဲက ၁။ နတ်မျက်စိကဲ့သို့ သိလိုရာကို အထူးမြင်တတ်တဲ့ ဒိဗ္ဗစက္ခုအဘိညာဏ် ၂။ နတ်နားကဲ့သို့ အထူးကြားတတ်တဲ့ ဒိဗ္ဗသောတအဘိညာဏ် ၃။ သူတပါး၏စိတ်ကို သိတတ်တဲ့ ပရစိတ္တ၀ိဇာနန အဘိညာဏ် ၄။ အထူးထူးသော တန်ခိုးများကို ပြစွမ်းနိုင်တဲ့ ဣဒ္ဓိဝိဓအဘိညာသ် ၅။ ရှေးဘ၀က ဖြစ်ခဲ့ဖူးသည်များကို အစဉ်အောက်မေ့နိုင်တဲ့ ပုဗ္ဗေနိဝါသာနုဿတိ အဘိညာဉ်ဆိုတဲ့ အဘိညာဉ်ငါးပါးကို လောကီအဘိညာဉ်လို့ခေါ်ပြီး ဒီငါးပါးကို သာသနာပ အခါမှာလည်း သမထကမ္မဋ္ဌာန်းတစ်ခုခုကို အားထုတ်ပြီး ရယူနိုင်ပါတယ်။ နောက်ဆုံးအဘိညာဏ်ဖြစ်တဲ့ ၆။ ကိလေသာအာသဝေါ ကုန်ခမ်းစေတတ်တဲ့ အရဟတ္တမဂ်ဉာဏ်လို့ခေါ်တဲ့ အာသ၀က္ခယ အဘိညာဉ်ကတော့ သာသနာတွင်းကာလမှာ ၀ိပဿနာ တရားအားထုတ်ခြင်းဖြင့်ပဲ ရယူနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် သာသနာနဲ့ကြုံပြီး ၀ိပဿနာကို ပွားများအားထုတ်နိုင်တဲ့ အခုလိုကာလမျိုးမှာ အဘိညာဉ်ခြောက်ပါးနဲ့အတူ ရဟန္တာအဖြစ်ကို ရယူနိုင်ပါတယ်လို့ ဆိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါက သာဝကတွေအနေနဲ့ ရဟန္တာအဖြစ်ကို ရစေနိုင်တဲ့ အဆင့်အတန်းတွေကို ပြောပြတာဖြစ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် သဗ္ဗညုတဗောဓိ၊ ပစ္စေကဗောဓိမှတပါး သာဝကဗောဓိ အကြောင်းကို အကျဉ်းတင်ပြရခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
နောက် ပစ္စေကဗုဒ္ဓ အကြောင်းပြောရရင် ပစ္စေကဗောဓိဉာဏ်ကိုရတဲ့ ပစ္စေကဗုဒ္ဓ ဘုရားရှင်တွေဟာ သဗ္ဗညုဘုရားရှင်များ မပွင့်တဲ့ သာသနာပ အခါမှာပဲ ပွင့်တော်မူကြပါတယ်။ သဗ္ဗညုတ ဘုရားအလောင်းတော်များ လူ့ပြည်မှာ ဖြစ်လာတဲ့အခါ ပစ္စေကဗုဒ္ဓ ဘုရားရှင်များဟာ ပရိနိဗ္ဗာန် စံဝင်ပြီး ကွယ်ပျောက်သွား ကြပါတယ်။ တကယ်တော့ ပစ္စေကဗုဒ္ဓ ဘုရားရှင်တွေဟာ သစ္စာလေးပါးတရားတော်ကို ကိုယ်တိုင်ပဲ သိမြင်လေ့ရှိပြီး သူတပါးတို့သိအောင် မဟောကြားနိုင်ပါဘူး။ ပေးကမ်းလှူဒါန်းတဲ့ သူတွေကိုတော့ လှူပြီးဆုတောင်းတဲ့အခါ တောင်းတဲ့ဆုနဲ့ ပြည့်စုံစေနိုင်ပါတယ်။ ပစ္စေကဗုဒ္ဓ ဘုရားရှင်တို့ဟာ ဂုဏ်တော်အဆင့်အားဖြင့် သဗ္ဗညုဘုရားရှင်တို့အောက် နိမ့်ကျပြီး ရဟန္တာတို့ထက် မြင့်မြတ်ပါတယ်။
ဒီပစ္စေကဗုဒ္ဓအဖြစ်နဲ့ ပစ္စေကဗောဓိဉာဏ် ရဖို့အတွက် ဒါနစတဲ့ပါရမီဆယ်ပါး၊ ဥပပါမရမီဆယ်ပါးဆိုတဲ့ ပါရမီတွေကို နှစ်သင်္ချေနဲ့ ကမ္ဘာတစ်သိန်းကြာအောင် ပါရမီ ဖြည့်ကျင့်ရပါတယ်။ ဒီပစ္စေက ဗုဒ္ဓများဟာလည်း ၁။ ပညာရှေ့ထား ပါရမီပွားတဲ့ ပညာဓိက ပစ္စေကဗုဒ္ဓ ၂။ သဒ္ဓါရှေ့ထား ပါရမီပွားတဲ့ သဒ္ဓါဓိက ပစ္စေကဗုဒ္ဓ ၃။ ၀ိရိယရှေ့ထား ပါရမီပွားတဲ့ ၀ီရိယာဓိက ပစ္စေကဗုဒ္ဓလို့ သုံးမျိုးခွဲခြားနိုင်ပါတယ်။ ဘယ်လိုပဲ ကွဲပြားပေမယ့် နှစ်သင်္ချေနဲ့ ကမ္ဘတစ်သိန်းကြာအောင် ပါရမီတွေကိုဖြည့်ပြီး ပါရမီအထွတ်အထိပ်ကို ရောက်တဲ့အခါ ဆရာမရှိဘဲ မိမိကိုယ်တိုင် သစ္စာလေးပါးကို ထိုးထွင်း၍သိသော မဂ်ဉာဏ်ကို ရတော်မူပါတယ်။ ဒီမဂ်ဉာဏ်ကို ပစ္စေကဗောဓိဉာဏ်လို့ခေါ်ပါတယ်။ ဒီလို ပစ္စေကဗောဓိဉာဏ်ကို ရရှိတော်မူတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်သူမြတ်များကို ပစ္စေကဗုဒ္ဓလို့ ခေါ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလောက်ဆိုရင် ဒကာလေးသိချင်တဲ့ ရဟန္တာနဲ့ ပစ္စေကဗုဒ္ဓအကြောင်း အနည်းငယ်တော့ သိနိုင်လောက်ပြီလို့ ထင်ပါတယ်။ စာပေမှာအများကြီး အကျယ်ဖွင့်ထားပေမယ့် ဒီနေရာမှာတော့ အဓိကကျတဲ့ အချက်လောက်ကိုပဲ ရွေးထုတ်တင်ပြလိုက်ပါတယ်။ မသိတာရှိရင် နားမလည်တာရှိရင် နောက်ထပ်ပြီး မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။
မဟာဗုဒ္ဓ၀င် (ပထမတွဲ၊ ပထမပိုင်း)၊ မင်းကွန်းတိပိဋကဓရ ဆရာတော်
လယ်တီဒီပနီပေါင်းချုပ် (စတုတ္ထတွဲ၊ ဥတ္တမပုရိသဒီပနီ)၊ လယ်တီဆရာတော်
သုတေသနသရုပ်ပြ အဘိဓာန်၊ အရှင်သြဘာသာဘိဝံသ
၀ိသုဒ္ဓိမဂ်၊ အဋ္ဌကထာ၊ မြန်မာပြန် (ဒုတိယတွဲ)
။ အချိန် 6/26/2010 11:35:00 AM
။ အချိန် 6/25/2010 08:23:00 AM
10 Jun 10 07:36
အရှင်ဘုရား ကျန်းမာချမ်းသာပါရဲ့လားဘုရား…။ သရဏဂုံတည်ပြီးလို့ ငါးပါးသီလမြဲသွားတဲ့ လူတစ်ယောက်ဟာ အပါယ်ကျနိုင်ပါသေး သလားဘုရား..။ ပြီးတော့သောတာပန် အရိယာတိုင်းဟာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို သောတာပန်ဖြစ် ပြီလို့သိနိုင်ပါသလားဘုရား..။
11 Jun 10 14:24
သရဏဂုံတည်ပြီး ငါးပါးသီလမြဲသွားတဲ့ သူတစ်ယောက်ဟာ အပါယ်မလားနိုင်တော့ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ပုထုဇင် တစ်ယောက်ရဲ့ သရဂုံတည်မှုနဲ့ ငါးပါးသီလလုံခြုံမှုက ပုထုဇင်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေတဲ့အပြင် သဒ္ဓါတရားလည်း မခိုင်သေးဘဲ အချိန်မရွေး ပြောင်းလဲနိုင်တဲ့အတွက် အပါယ်ဘေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သေချာပေါက် မပြောနိုင်ပါဘူး။ သောတာပန်စတဲ့ အရိယာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သွားရင်တော့ ဒီအရိယာပုဂ္ဂိုလ်ဟာ သဒ္ဓါတရားခိုင်သွားတဲ့အပြင် သရဏဂုံနဲ့ ငါးပါးသီလခေါ် ကံငါးပါးကို လုံးဝမြဲသွားပြီ ဖြစ်တဲ့အတွက် အပါယ်တံခါးပိတ်သွားပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ အပါယ်မလားတော့ပါဘူး။
သောတာပန်ဆိုတာ အလွယ်နားလည်အောင် ပြောရရင် သောတာပတ္တိမဂ်ဉာဏ်၊ ဖိုလ်ဉာဏ်ကို ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကို ဆိုပါတယ်။ သောတာပန် အရိယာတိုင်းဟာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို သောတာပန် ဖြစ်ကြောင်း ကောင်းကောင်းသိနိုင်ပါတယ်။ ၀ိပဿနာ တရားအားထုတ်ရင်း ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ ဉာဏ်အဆင့်ဆင့်ကို ရရှိပြီးနောက် သောတာပတ္တိမဂ်ဉာဏ်ကို ရတဲ့အခါ အဲဒီယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ရတဲ့ သောတာပတ္တိမဂ်က ကိလေသာတွေထဲက ဒိဋ္ဌိနဲ့ ၀ိစိကစ္ဆာဆိုတဲ့ ကိလေသာနှစ်ပါးကို အကြွင်းမဲ့ ပယ်သတ်လိုက်ပါတယ်။ ဒီလို ပယ်သတ်လိုက်တာနဲ့ တစ်ပြိုင်တည်း ဒီသောတာပတ္တိမဂ်ကို ရတဲ့ ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ စိတ်အစဉ်ဟာ အယူဝါဒ မှန်ကန်ဖြောင့်မတ်လာပြီး ရတနာသုံးပါးနဲ့ ကံကံရဲ့အကျိုးတွေ အပေါ်မှာ သို့လောသို့လော သံသယစိတ်တွေ ဘယ်တော့မှ မဖြစ်တော့ပါဘူး။ ရတနာသုံးပါးနဲ့ ပတ်သက်လာရင် အဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ စိတ်ဟာအမြဲကြည်လင်နေပြီး ကြည်ညိုမှုတွေနဲ့ ပီတိတရားတွေပဲ တိုးပွားနေတတ်ပါတယ်။ ဒီလို အခြေအနေမျိုးမှာ ဒီသောတာပတ္တိမဂ် ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာ မိမိ သောတာပန် ဖြစ်ကြောင်း ကောင်းကောင်းသိနိုင်ပါတယ်။ တစ်ချို့ တရားအားထုတ်တဲ့ အရှိန်ကြောင့် ကိလေသာလေးတွေ ခဏငြိမ်နေတဲ့ အခါမျိုးရှိတတ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တကယ် သောတာပတ္တိမဂ်ဉာဏ်ကို ရတာမဟုတ်တော့ ကိလေသာနဲ့တွေ့တဲ့အခါ ပြန်ပေါ်လာတတ်ပါတယ်။ တကယ်ရတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ အကြွင်းမဲ့ပယ်သတ်ပြီးဖြစ်လို့ ဘယ်တော့မှ မပေါ်တော့ပါဘူး။ ဒါကြောင့် ၀ိပဿနာတရားကို မှန်ကန်တဲ့လမ်းစဉ်နဲ့ အားထုတ်ပြီး ဉာဏ်အဆင့်ဆင့် ရရှိသွားကြတဲ့ သောတာပန်စတဲ့ အရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာ မိမိဘယ်အဆင့် ရောက်နေတယ်ဆိုတာ ကောင်းကောင်းသိနိုင်ပါတယ်လို့ ဆိုခြင်းဖြယ်ပါတယ်။
08 Jun 10 03:29
အရှင်ဘုရားတပည့်တော် တစ်ခုလျောက်ထားချင်ပါတယ်ဘုရား။ ၀ိနည်းနဲ့ ညီအောင်မနေတဲ့ ရဟန်းတွေကို ၀ိနည်းနားလည်တဲ့ လူဝတ်ကြောင်က ကဲ့ရဲ့အပြစ်တင်ရင် အပြစ်ရှိပါသလားဘုရား..။
08 Jun 10 05:25
စေတနာအလိုဆိုးနဲ့ မဟုတ်ဘဲ သာသနာတော်ကို ကြည်ညိုတဲ့ စိတ်ကောင်းစေတနာကောင်းနဲ့ ပြောဆိုပြုပြင်တဲ့ သဘောဆိုရင် အပြစ်မဖြစ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် သတိတော့ ထားဖို့လိုပါတယ်။ သံဃာနဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ကို ခွဲခြားတတ်ဖို့လည်းလိုပါတယ်။ တစ်ခါတစ်လေ ပုဂ္ဂိုလ်ကို ရည်ရွယ်ပေမယ့် အသုံးအနှုန်းက သံဃာအားလုံးအထိ ဖြစ်သွားရင် စေတနာက ဝေဒနာ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဒီနေ့ခေတ်မှာ လူဝတ်ကြောင်က ရဟန်းတော်ကို တိုက်ရိုက်ပြောတာထက် ဆိုင်ရာဆရာသမားကို ပြောဆိုလျှောက်ထား အသိပေးစေတာက ပိုပြီး လူတွေအတွက် အပြစ်ကင်းနိုင်ပါတယ်။ ဘုရားလက်ထက်က ၀ိသာခါတို့၊ အနာထပိဏ်တို့ ဆရာဇီဝကတို့လည်း ရဟန်းတော်များကို အမြင်မတော်တာတွေ့ရင် ကဲ့ရဲ့ပြစ်တင်ပြီး ဘုရားရှင်ကို လျှောက်ထားလေ့ရှိပါတယ်။ သူတို့ဆိုရင် သူတို့ကိုယ်တိုင် ဥပါသကာ ဥပါသိကာမဂုဏ်ရည်တွေနဲ့ ပြည့်စုံတဲ့အပြင် သာသနာတော် အတွက်လည်း အလွန်ကျေးဇူးများတဲ့ သူတွေဖြစ်ကြပါတယ်။ အဓိကကတော့ စေတနာ ရည်ရွယ်ချက် မှန်ကန်ကောင်းမွန်ဖို့နဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို အပြစ်မဖြစ်စေဖို့ အစွန်းမရောက်အောင် နေထိုင်ပြောဆိုတာ အကောင်းဆုံးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
20 Jun 10, 12:27 PM
ဘုန်းဘုန်း မင်္ဂလာပါ။ တပည့်တော် ကောင်းကောင်း သဘောမပေါက်တာလေး မေးလျှောက်ပါရစေ ဘုရား..။ အရှိကို အရှိအတိုင်း စိတ်ကျက်စားနေတဲ့ အချိန် ကာလသုံးပါး လွတ်နေတယ်လို့ ကြားနာဖူးပါတယ် ဘုန်းဘုန်း..။ အတိတ်ကာလနဲ့ အနာဂတ်ကာလ လွတ်နေတယ်ဆိုတဲ့ သဘောကို နည်းနည်း သဘောပေါက်သလို ရှိပေမယ့် ပစ္စုပ္ပန်ကာလပါ လွတ်တယ် ဆိုတာကို ခေါင်းရှုပ်နေတယ် ဘုရား။ မရှင်းလို့ တရားပြန်နာရင် ရှင်းသလိုလို ရှိသွားပေမယ့် ပြန်ရှုပ်သွားပြန်တယ် ဘုရား..။ ဘုန်းဘုန်း အနေနဲ့ နားလည် သဘောပေါက်သလောက် တပည့်တော်ကို ရှင်းပြပေးပါဦး ဘုရား..။ ဘုန်းဘုန်း ကျန်းမာပါစေ။ ရိုရိုသေသေ ဦးတင်လျက်.. ဖိုးသား။
21 Jun 10, 03:36 PM
ဖိုးသားရေ... ဒကာလေးပြောသလို အရှိကို အရှိအတိုင်း စိတ်အစဉ် ကျက်စားနေတဲ့ အခိုက်မှာ အတိတ်ကာလလည်းမဟုတ်၊ ပစ္စုပ္ပန်၊ အနာဂတ် ကာလလည်း မဟုတ်ဘဲ ကာလက လွတ်နေတယ် ဆိုတဲ့သဘောက စိတ္တာနုပဿနာကို သတိမပြတ် မလွတ်တမ်း ရှုမှတ်နေတဲ့ ယောဂီဟာ စိတ်အစဉ် အားလုံးကို တစ်ခုပြီးတစ်ခု မလွတ်တမ်း သိနေတဲ့ သဘောရှိတဲ့အတွက် တစ်သမှတ်တည်း မရှိဘဲ ကာလ၀ိမုတ္တိ ဖြစ်နေတဲ့ သဘော ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ သိတဲ့အတိုင်း စိတ်ဆိုတာကလည်း အဖြစ်မြန် အပျက်မြန်တဲ့ သဘောရှိတဲ့အတွက် တစ်ခါတည်း ထိန်းချုပ်ထားလို့ ရတဲ့အရာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် စိတ်အစဉ်ကို အရှိအတိုင်း လိုက်သိနေတဲ့ ဆိုတာကလည်း ရှေ့စိတ်ကို နောက်စိတ်က လိုက်လိုက်ပြီး သိနေတာကိုပဲ ဆိုလိုတာ ဖြစ်ပါတယ်။ စိတ်တစ်ခုနဲ့ တစ်ခုကြား ပြောင်းလဲမှုက အရမ်းမြန်လွန်းလှတဲ့အတွက် ရှေ့စိတ်ကို သိလိုက်တာနဲ့ တစ်ပြိုင်နက် အဲဒီစိတ်ပျောက်ပြီး နောက်သိစိတ်ပေါ်လာတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီနောက်သိစိတ်ကိုလည်း နောက်နောက်စိတ်တွေက ဆက်ကာဆက်ကာ ဖြစ်ဖြစ်နေ၊ အဲဒီလို ဖြစ်ဖြစ်နေတာကို လိုက်လိုက်သိနေတာ ဖြစ်တဲ့အတွက် စိတ်အစဉ်ကို တစ်ခုပြီး တစ်ခု သတိမပြတ် လိုက်သိနေတဲ့ ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်အတွက် ကာလဆိုတာ ရှိတယ်လို့ မထင်ရလောက်အောင် လွတ်နေတဲ့ သဘောရှိပါတယ်။ ဆိုကြပါစို့။ ကိုယ့်စိတ်မှာ ရာဂဖြစ်တဲ့အခါ အဲဒီရာဂစိတ် ဖြစ်တာကို သိတာနဲ့ ရာဂစိတ်က ပျောက်သွားပြီး သိစိတ်က ရောက်သွားတဲ့အထိ စိတ်အစဉ် အဖြစ်မြန်သလို အဲဒီသိစိတ်ကိုလည်း နောက်စိတ်တစ်ခုက အရှိအတိုင်း သိသိသွားနေတဲ့ သဘောရှိလို့ ဒီလို စိတ်အစဉ်ကို တစ်ခုပြီးတစ်ခု လိုက်လိုက်သိနေမှုမှာ အတိတ်လား၊ ပစ္စုပ္ပန်လား၊ အနာဂတ်လားလို့ ပြောရခက်လောက်အောင် ဖြစ်နေတဲ့အတွက် ကာလက လွတ်နေတယ်လို့ ဆိုခြင်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
။ အချိန် 6/23/2010 10:06:00 AM
ဒီနေ့ခေတ်လူငယ်များ အနေနဲ့ ဘာသာတရားအပေါ် အလေးမထားမှု၊ ဘာသာတရားနဲ့ ဝေးသွားမှုလောက်ပဲ ဆိုရင်တော့ တော်သေးတယ်လို့ ဆိုနိုင်ပေမယ့် ဘာသာတရားအပေါ် အဆိုးမြင်လာမှုကတော့ ဒါဟာ သူတို့လေးတွေအတွက် ပစ္စုပ္ပန် သံသရာ နှစ်ဖြာအကျိုး ဆုတ်ယုတ်စေမှုကို ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ လူငယ်တွေရဲ့ ဒီလို ဘာသာတရားအပေါ် အဆိုးမြင်လာမှုမှာ အခြားဘာသာတရားများနဲ့ ပတ်သက်လို့ ဘာမှပြောစရာ မရှိပေမယ့် ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အမြင်များကတော့ ပြောစရာ ဖြစ်လာပါတယ်။ သူတို့မြင်တဲ့ အမြင်နဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ အနှစ်သာရ အသွင်က တစ်ခြားစီ ဖြစ်နေပါတယ်။ အကျင့်တရားကို ဦးစားပေးထားတဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ ကျင့်ကြံမှု ၀ီရိယ၊ ယုံကြည်မှု သဒ္ဓါတရား ယုတ်လျော့လာတဲ့ လူငယ်များကြားမှာ မကျင့်ကြံနိုင်တဲ့ သူတွေက ကျင့်ကြံနေတဲ့သူတွေကို အဆိုးမြင်လာတာတွေ ဖြစ်လာတာကို တွေ့ရပြန်ပါတယ်။ သေချာတာကတော့ ဒီလို အဆိုးမြင်လာမှုတွေဟာ ဘာသာတရား၊ အထူးသဖြင့် ဗုဒ္ဓဘာသာ တရားကြောင့် ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဆိုတာ အသေအချာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
လူငယ်များနဲ့ အနေများတော့ လူငယ်တွေအကြောင်း သိလာတာတွေလည်း တစ်နေ့တစ်ခြား များပြားလာပါတယ်။ အထူးသဖြင့် မြန်မာလူငယ်များနဲ့ ဘာသာတရား အဆုံးအမများကြားမှာ ဖြစ်နေတဲ့ သဘောလေးတွေကို သိလာရတာ ပိုများလာပါတယ်။ အများအားဖြင့် အမည်ခံ ဗုဒ္ဓဘာသာများ ဖြစ်နေကြတဲ့ မြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာ လူငယ်များဟာ အနှစ်သာရများထက် အပျော်အပါးများမှာ ပိုမိုအားသန်လာတာကို တွေ့နေရပါတယ်။ အသောက်အစား အပျော်အပါးများနဲ့ ယုံကြည်မှု သဒ္ဓါ၊ စဉ်စားဆင်ခြင်မှု ပညာ ယုတ်လျော့လာမှုများက ဘာသာတရား အဆုံးအမများအပေါ် အလေးမထားမှု၊ မလိုက်နာ မကျင့်သုံးမှုကို ပိုပြီးဖြစ်လာစေပါတယ်။ ပိုဆိုးတာက ကိုယ့်ကိုယ်တိုင် မကျင့်နိုင်တာကို သတိမပြုကြဘဲ ကျင့်ကြံသူတွေကို အဆိုးမြင်တတ်ကြတဲ့ အပြင် ထားလိုက်ပါကွာ၊ ရပါတယ်ကွာဆိုတဲ့ စကားတွေနဲ့ မကျင့်ကြံဖြစ်အောင် ပြောဆိုလေ့ရှိတာတွေက ပိုဆိုးပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း တစ်ချို့ ဘာသာရေးအပေါ် စိတ်ဝင်စားတဲ့ လူငယ်တစ်ချို့ဟာ ဘာသာရေး လုပ်တာကိုပဲ တိုးတိုးတိတ်တိတ် ခိုးကြောင်ခိုးဝှက် လုပ်နေကြရသလို ဖြစ်နေတာ ဖြစ်ပါတယ်။
တစ်ချို့ လူငယ်တွေကလည်း ဆိုးတော့ဆိုးပါတယ်။ ကိုယ့်ကိုယ်တိုင် မလုပ်နိုင်တာကို မသိကျိုးကျွံပြုပြီး လုပ်တဲ့သူတွေကိုပဲ ဘာသာရေး မှိုင်းမိနေသလိုလို၊ ပေါက်နေသလိုလို၊ ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ ဘာသာရေး လိုက်စားတာကိုပဲ မလုပ်ကောင်းတဲ့ အလုပ်ကို လုပ်နေသလိုလို၊ သူတို့ပျော်ပါးသလို မပျော်ပါး မသောက်စားတဲ့အခါဆိုရင် ဘာသာတရားကြောင့် ဂေါက်သွားသလိုလို စသဖြင့် တိုက်ရိုက်တစ်မျိုး၊ သွယ်ဝိုက်လို့ တစ်ဖုံ၊ ရှေ့တစ်မျိုး ကွယ်ရာတစ်မျိုး အမျိုးမျိုး မထိတထိ ရိတိတိလုပ်တတ်တာတွေလည်း ကြားသိနေရပြန်ပါတယ်။
နောက် ဘာသာတရားလုပ်လာတဲ့ သူတစ်ချို့ရဲ့ လွဲမှားမှုတွေကြောင့် တစ်ချို့လူငယ်တွေက ဒီလိုဖြစ်တာ ဘာသာတရား လိုက်စားလို့ ဖြစ်တာဆိုတဲ့ အမြင်တွေ ဖြစ်လာတာလည်း ရှိတတ်ပါတယ်။ တစ်ချို့က ဘာသာတရား လိုက်စားပေမယ့် ဆရာကောင်း သမားကောင်းနဲ့ နည်းစနစ်ကျကျ မလိုက်စားမိဘဲ ပုဂ္ဂိုလ်ရေး ယုံကြည်ကိုးကွယ်မှုများနဲ့ အဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ ၀ါဒအတိုင်း လိုက်လုပ်မိရာက ၀ါဒမှိုင်းမိပြီး တရားလည်းမရ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လည်း ကိုယ်အမူအရာ၊ နှုတ်အမူအရာ စတာတွေမှာ ပြောင်းလဲမှု မရှိတဲ့အပြင် ဘာသာရေးလုပ်ရင်း အပြောကြမ်းအလုပ်ကြမ်း အငြင်းအခုံကြမ်းတွေ ဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့ ဒါဟာ ဘာသာရေးကို လိုက်စားလွန်းအားကြီးလို့ ဖြစ်သွားတာလို့ အများရဲ့ ဝေဖန်စရာတွေ ဖြစ်လာတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အမှန်တော့ ဒါဟာ လွဲမှားစွာ ကိုးကွယ်ရင်း နည်းစနစ်မမှန်တဲ့ အသင်အပြတွေကြောင့်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဘာသာတရား လုပ်တော့မယ်၊ အထူးသဖြင့် ၀ိပဿနာတရား အားထုတ်တော့မယ်ဆိုရင် ဆရာကောင်း သမားကောင်းကို အရင်ဆုံး ရှာဖွေဆည်းကပ်ကြဖို့ တိုက်တွန်းကြခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် အများက မဟုတ်တာလုပ်နေတာ၊ သောက်တာစားတာတွေနဲ့ ပျော်ပါးနေတာ များနေတော့ ဒီအပျော်အပါးတွေကို ရှောင်ပြီး ကံငါးပါးကို လုံအောင် ကြိုးစားကြတဲ့ လူငယ်အချို့အတွက် ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးမှာ အဆင်မပြေတာတွေ ရှိလာတာကိုလည်း တွေ့ရပြန်ပါတယ်။ အသောက်အစား အပျော်အပါး ၀ါသနာများတဲ့ သူတွေနဲ့ အတူသွားအတူလာ မလုပ်နိုင်ဘဲ တစ်ယောက်တည်း အနေများလာတဲ့ အခါကျတော့ တစ်ချို့က ဘာသာတရား လိုက်စားတဲ့သူတွေဟာ လူမှုရေးတွေမှာ အဆင်မပြေဘူးလို့ ဆိုလာတဲ့သူတွေ ရှိသလို ဘာသာတရား အဆုံးအမအတိုင်း နေတတ်ကြတဲ့ သူတွေကျပြန်တော့လည်း ဘာသာတရားလုပ်ရင်း တဖြည်းဖြည်း တစ်ယောက်တည်း အထီးကျန်လာတာတွေ ဖြစ်လာတော့ အပေါင်းအသင်းကဏ္ဍ၊ လူမှုရေးကဏ္ဍတွေမှာ ဘေးရောက်လာတယ်လို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ခံစားလာတွေလည်း ရှိလာပြန်ပါတယ်။
တကယ်တော့ ဒီလိုဘာသာတရား လိုက်စားတဲ့ သူတွေအနေနဲ့ လူမှုရေးပိုင်းမှာ အံဝင်ဂွင်ကျ ဖြစ်မလာတာတွေဟာ ဘာသာတရားကြောင့် မဟုတ်ပါဘူး။ ဘာသာတရား အဆုံးအမကြောင့် မဟုတ်ပါဘူး။ သောက်မှစားမှ ပျော်မှပါးမှ အပေါင်းအသင်းများတယ်၊ လုပ်ငန်းခွင် အဆင်ပြေတယ်၊ လူမှုရေး သိတတ်တယ်ဆိုတဲ့ ဒီနေ့ခေတ်ရဲ့ လူမှုရေးလို့ သတ်မှတ်ကြတဲ့ အချက်တွေကြောင့်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ လူမှုရေးဆိုတာတွေကို အပျော်းအပါး အသောက်အစားတွေ၊ ကိလေသာအာရုံတွေနဲ့ ဖန်တီးလိုက်တဲ့အတွက် ကိလေသာနည်းအောင်၊ အကျင့်တရားကောင်းအောင် တားမြစ်ဆုံးမပေးတတ်တဲ့ ဘာသာတရားတွေနဲ့ ဆန့်ကျင်ဘက်လို ဖြစ်လာကာ ဘာသာတရားအတိုင်း နေထိုင်ကျင့်ကြံသူတွေနဲ့ပါ ဆန့်ကျင်လာသလို ဖြစ်လာရခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလို သောက်မှစားမှ ပျော်မှပါးမှ လူမှုရေးအဆင်ပြေတယ်၊ လူမှုဆက်ဆံရေး ကောင်းတယ်ဆိုရင်တော့ လူမှုရေး အဆင်မပြေချင် နေပါစေ သံသရာရေး အဆင်ပြေဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။
ကိလေသာအာရုံများမှာ လိုက်စားမှု အားကောင်းလာတဲ့ လူတွေများလာတဲ့ အခါဆိုတော့လည်း ဒါတွေရှောင်ကြတဲ့ သူအနည်းစုအတွက် အများလုပ်တဲ့အလုပ် မလုပ်တဲ့အခါ မလုပ်တဲ့သူကပဲ မှားသလို ဖြစ်လာတဲ့ သဘောပါပဲ။ ဘာသာတရားကြောင့် လူမှုရေးမှာ ထိခိုက်လာတာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ အဲလိုပြောမယ်ဆိုရင် ဘုရားလက်ထက်က သောတာပန်စတဲ့ အရိယာဘ၀နဲ့ လူမှုရေးရော သာရေးနာရေးတွေမှာရော အားလုံးအဆင်ပြေပြီး လောကီလောကုတ္တရာ ကောင်းကျိုးတွေ ဖြစ်သွားကြတဲ့ သူတွေဆိုရင် ဘာကြောင့်လဲလို့ ထောက်ပြစရာ ဖြစ်လာပါတယ်။ အဓိကကတော့ သတ်မှတ်ချက် လွဲလာတာတွေ၊ အများစုက မဟုတ်တာ လုပ်လာတာတွေ များလာလို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အမှန်တော့ ဗုဒ္ဓဘာသာ သဘောအရ ဘာသာရေးဟာ လူတိုင်းအတွက် လိုအပ်ပါတယ်။ အရွယ်မရေး လိုအပ်ပါတယ်။ လူကြီးများမှမဟုတ် လူငယ်များမှာလည်း လိုအပ်ပါတယ်။ စစ်မှန်တဲ့ နည်းစနစ်များနဲ့ အကျင့်မှန်အတိုင်း လိုက်နာသွားမယ်ဆိုရင် လူငယ်ပဲ ဖြစ်ဖြစ် လူကြီးပဲ ဖြစ်ဖြစ် ဘာသာတရား လိုက်စားတဲ့အတွက် အပြစ်ပြောစရာ ဝေဖန်စရာ မရှိနိုင်ပါဘူး။ ဗုဒ္ဓရဲ့ အဆုံးအမ တရားတော်တွေကိုသာ ဟောတော်မူတဲ့အတိုင်း ကျင့်ကြံလိုက်နာနိုင်မယ်ဆိုရင် ကျင့်ကြံလိုက်နာသူရော၊ သူ့ကို အမှီပြုတဲ့သူတွေပါ ကောင်းကျိုးတွေကို ဖြစ်စေမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လည်းဆိုတော့ တရားတော်ရဲ့ ဂုဏ်တော်ထဲမှာကိုက ဗုဒ္ဓရဲ့ ဒီအဆုံးအမတရားတွေဟာ ကောင်းမွန်မှန်ကန်စွာ ဟောထားခြင်း၊ ကိုယ်တိုင်ဒိဋ္ဌသိမြင်နိုင်ခြင်း၊ ဝေဖန်ခံနိုင်ခြင်း၊ လုပ်နိုင်ရင်လုပ်နိုင်တဲ့အလျောက် အကျိုးတရား ဖြစ်ပေါ်စေခြင်း စတဲ့ ၀ိသေသဂုဏ်များ ပါဝင်နေပြီး ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
တကယ်လုပ်ရင် တကယ်ရတယ်ဆိုတဲ့ အချက်ကို ဗုဒ္ဓဘာသာက လက်တွေ့အကောင်အထည် ဖော်ပေးနိုင်ပါတယ်။ တစ်ချို့လူငယ်တွေဆိုရင် ဗုဒ္ဓညွန်ကြားတဲ့အတိုင်း သီလလုံအောင်ထိန်းပြီး ၀ိပဿနာ အလုပ်မှာ နည်းစနစ်မှန်မှန်နဲ့ လုပ်လိုက်တဲ့အတွက် သူတို့ကိုယ်တိုင် ကိုယ်အမူအရာ၊ နှုတ်အမူအရာ၊ စိတ်အမူအရာလေးတွေ နူးညံ့ပျော့ပြောင်းလာပြီး သူတို့ရဲ့ ရုပ်ရည်အဆင်းဟာ အပြစ်ကင်းပြီး ကြည်လင်အေးမြလာတာကို တွေ့ရတတ်ပါတယ်။ ပူလောင်မှုမရှိ လောဘဒေါသမရှိတဲ့ အသွင်အပြင်တွေက ကြည့်တဲ့သူတွေအထိ အေးငြိမ်းမှုကို ဖြစ်စေတာ တွေ့ရတတ်ပါတယ်။ ဒါဟာ ငယ်ပေမယ့် ဘာသာတရား အဆုံးအမတိုင်း လက်တွေ့လိုက်နာ ကျင့်သုံးနေထိုင်တဲ့ အတွက်ကြောင့်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဆိုလိုတာက ဘာသာတရားဟာ မှိုင်းတစ်ခု မဟုတ်ဘဲ ပုဂ္ဂိုလ်မရွေး၊ အရွယ်မရွေး လိုအပ်တဲ့ တရားဖြစ်တယ်ဆိုတာ သိစေချင်တာပါ။ အထူးသဖြင့် လူငယ်များကြားမှာ ဖြစ်တတ်တဲ့ ဘာသာတရားနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အမြင်တွေဟာ လွဲမှားနေပြီး ဘာသာတရားကြောင့် ဘာဖြစ်တယ်၊ ညာဖြစ်တယ်၊ ဘာအားနည်းတယ်၊ ညာအားနည်းတယ်ဆိုတဲ့ ယူဆချက်တွေဟာ ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ အဆုံးအမတွေကို လက်တွေ့လိုက်နာကျင့်သုံးရင်း ပစ္စုပ္ပန်ငြိမ်းချမ်းမှုနဲ့ အတူ သံသရာအတွက်ပါ နေတတ်သေတတ်သွားတဲ့ ဘုရားတပည့်သား အစစ်အမှန် တပည့်ငယ်များ အတွက်တော့ ဒါဟာ လုံးဝကို လွဲနေတဲ့ အမြင်ပဲ ဖြစ်တယ်ဆိုတာ သဘောပေါက်စေချင်တာပါ။ ဆရာကောင်း သမားကောင်းထံမှာ နည်းခံပြီး စစ်မှန်တဲ့ နည်းစနစ်နဲ့ လက်တွေ့လိုက်နာ ကျင့်သုံးနိုင်မယ်ဆိုရင် လူကြီးရော လူငယ်ပါ အချိန်မရွေး၊ အရွယ်မရွေး တရားစစ်တရားမှန်နဲ့ ငြိမ်းချမ်းရာအမှန်ကို ဗုဒ္ဓဘာသာက ဖော်ဆောင်ပေးနိုင်တယ်ဆိုတာ နားလည်စေချင်တာပါ။
ဒါကြောင့် လူငယ်များနဲ့ ဘာသာတရားကြား အထင်မှား အမြင်မှားနေတာတွေဟာ ဆုတ်ယုတ်လာတဲ့ သဒ္ဓါပညာတရားများ၊ တိုးပွားလာတဲ့ ကိလေသာတရားများ၊ လွဲမှားနေတဲ့ လောကပညတ် သတ်မှတ်ချက်များနဲ့ နည်းစနစ်မမှန်တဲ့ ကျင့်သုံးလိုက်နာမှုများ စတာစတာတွေကြောင့် ဖြစ်တယ်ဆိုတာ သဘောပေါက် သိမြင်ပြီး စစ်မှန်တဲ့ ညွှန်ကြားမှုနဲ့ လက်တွေ့လိုက်နာ ကျင့်သုံးမှုကို တိုက်ရိုက် အကောင်အထည်ဖော်ကာ စွမ်းနိုင်သမျှ ကျင့်ကြံနေထိုင်ရင်း လူငယ်ဖြစ်စေ၊ လူကြီးဖြစ်စေ ဘာသာတရား အဆုံးအမများနဲ့ ပစ္စုပ္ပန် သံသရာ နှစ်ဖြာ ကြီးပွားအောင် အသိနဲ့အကျင့် ထပ်တူဖြစ်စေဖို့ လိုကြောင်း စေတနာစကား မေတ္တာအားဖြင့် တိုက်တွန်းသမှု ပြုလိုက်ရပါတယ်။
။ အချိန် 6/21/2010 08:33:00 AM
အယူဝါဒဟူသည်ကလည်း အခက်သားပင်။ ယုံကြည်မိပြီ၊ စွဲလန်းမိပြီဆိုလျှင် ဖြတ်ရန် အလွန်ခက်လှပေ၏။ မတူညီသည့် ဆရာသမား၊ မတူညီသည့် ဆုံးမစကားများတွင် မတူညီသည့် အယူအဆများကလည်း သူ့ထက်ငါအပြိုင် အနိုင်ပြုလိုမှုကို ဖြစ်ပေါ်စေပေ၏။ တစ်ခါတစ်ရံ အဓိပ္ပါယ်တူညီသော်လည်း ယူဆပုံချင်း မတူညီကြသဖြင့် အငြင်းပွားဖွယ်ရာများ ဖြစ်ပေါ်တတ်သည်များ ရှိတတ်၏။ ထိုအခါမျိုးတွင် မိမိတို့ ကိုယ်တိုင်သာလျှင် မည်သည့်အယူအဆက မှန်သည်၊ မည်သည့်အယူအဆက သဘာဝယုတ္တိကျသည်၊ မည်သည့်အယူအဆက လက်တွေ့ဆန်သည် စသဖြင့် စဉ်းစားဆုံးဖြတ် လက်ခံလိုက်နာ ကျင့်သုံးကြရန်သာ ဖြစ်၏။
မြတ်စွာဘုရားရှင် နာဠန္ဒမြို့တွင် သီတင်းသုံးတော်မူစဉ်ကလည်း ထိုကဲ့သို့ အယူဝါဒ လွဲချော်ကြသူများနှင့် တရားစကား ဆွေးနွေးပြောဆိုခဲ့ရသည်များ ရှိ၏။ ထိုစဉ်က မြတ်ဗုဒ္ဓသည် ဒီဃတပဿီ အမည်ရှိသည့် နိကဏ္ဌ တိတ္တိဆရာကြီး၏ တပည့်နှင့် ဆုံတွေ့ကာ အယူဝါဒရေးရာများ ပြောဆိုဆွေးနွေးဖြစ်ခဲ့၏။ ဒီဃတပဿီနှင့် တွေ့စဉ် မြတ်ဗုဒ္ဓက သူ့အား “တပဿီ… သင်တို့ဆရာ နိကဏ္ဌသည် မကောင်းမှုပြုခြင်း၊ မကောင်းမှု ဖြစ်ခြင်းများသည် အဘယ်မျှသော ကံများကြောင့် ဖြစ်ကြောင်း ပညတ်သတ်မှတ်ပေးသနည်း..” ဟု မေးတော်မူလိုက်၏။ ဒီဃတပဿီက “အရှင်ဂေါတမ… နိကဏ္ဌသည် ကံကံဟု ပညတ်သတ်မှတ်မှု မရှိ၊ ဒဏ်ဒဏ်ဟုသာ ပညတ်သတ်မှတ်လေ့ရှိကြောင်း” ပြန်လည်လျှောက်ထား၏။ ထိုအခါ မြတ်ဗုဒ္ဓက “ဒီဃတပဿီ သို့ဆိုလျှင် သင်တို့ဆရာ ပြောသည့်အတိုင်း ဒဏ်ဟုဆိုလျှင် မကောင်းမှုပြုခြင်း၊ မကောင်းမှုဖြစ်ခြင်း၌ အဘယ်မျှလောက်သော ဒဏ်တို့ကို ပညတ်သတ်မှတ်သနည်း..”ဟု ထပ်မံ မေးတော်မူသဖြင့် ဒီဃတပဿီက “အရှင်ဂေါတမ… ကာယဒဏ်၊ ၀စီဒဏ်၊ မနောဒဏ်ဟူသည့် ဒဏ်သုံးပါးကို သတ်မှတ်ပေးပါကြောင်း” လျှောက်ထားလေ၏။
ဆက်လက်၍ မြတ်ဗုဒ္ဓက တပဿီအား ထိုဒဏ်သုံးပါးသည် တူသလော၊ ကွဲပြားသလောဟု မေးမြန်းပြန်သည့်အခါ မတူကွဲပြားကြောင်း ပြန်လျှောက်သဖြင့် ထိုသုိ့မတူလျှင် ထိုဒဏ်သုံးပါးတွင် မည်သည့်ဒဏ်က အပြစ်အကြီးဆုံး ဖြစ်သနည်းဟု ထပ်မံမေးမြန်းရာတွင် ဒီဃတပဿီက နိကဏ္ဌအနေဖြင့် ကာယဒဏ်သည်သာ အပြစ်အကြီးဆုံး ဖြစ်ကြောင်း ပြန်လည်ဖြေကြား လျှောက်ထားလေ၏။ မြတ်စွာဘုရားသည် တပဿီဖြေကြားသည့် ကာယဒဏ်သည်သာ အပြစ်အကြီးဆုံး ဖြစ်ကြောင်းဟူသော အဖြေစကားကိုပင် သုံးကြိမ်သုံးခါ မေးမြန်းပြီး တစ်စုံတစ်ရာ ပြောဆိုခြင်းမပြုဘဲ နေတော်မူလေ၏။
ထိုအခါ ဒီဃတပဿီကလည်း မြတ်စွာဘုရားရှင်အား “အရှင်ဂေါတမ… အရှင်ဂေါတမသည် မကောင်းမှုပြုခြင်း၊ မကောင်းမှုဖြစ်ခြင်း၌ အဘယ်မျှလောက်သော ဒဏ်တို့ကို ပညတ်သတ်မှတ်ပါသနည်း”ဟု တန်ပြန်မေးခွန်း ထုတ်လေ၏။ မြတ်ဗုဒ္ဓက “ဒီဃတပဿီ… ငါသည် ထိုသဘောတရားများတွင် ဒဏ်ဟု မသတ်မှတ်၊ ကံဟုသာ သတ်မှတ်ကြောင်း” ဖြေကြားရာတွင် တပဿီက သို့ဆိုလျှင် အဘယ်မျှသော ကံတို့ကို ပညတ်တော်မူသနည်းဟု မေးမြန်းသဖြင့် ကာယကံ၊ ၀စီကံ၊ မနောကံဟူသည့် ကံသုံးမျိုးကို သတ်မှတ်ကြောင်းနှင့် ထိုသုံးပါးတွင် မနောကံသည်သာ အပြစ်အကြီးဆုံး ဖြစ်ကြောင်း ဖြေကြားတော်မူလိုက်၏။
ဤသို့ဖြင့် ဒီဃတပဿီနှင့် မြတ်ဗုဒ္ဓတို့၏ စကားဝိုင်းသည် ဤမျှလောက်ဖြင့်ပင် အဆုံးသတ်လမ်းခွဲကာ ဒီဃတပဿီသည် သူ၏ဆရာ နိကဏ္ဌထံသို့ သွားခဲ့လေ၏။ နိကဏ္ဌထံသို့ ရောက်ပြီးနောက် မြတ်စွာဘုရားရှင်နှင့် မေးမြန်းဆွေးနွေးခဲ့သည်များကို အကျိုးအကြောင်း ပြောပြသည့်အခါ နိကဏ္ဌသည် တပည့်ကျော်၏ မိမိအယူအဆအတိုင်း ကာယကံကသာ အပြစ်အကြီးဆုံးဖြစ်ကြောင်း မြတ်စွာဘုရားရှင်အား ဖြေကြား လျှောက်ထားမှုအပေါ် သဘောကျကျေနပ်ကာ မြတ်စွာဘုရား မိန့်တော်မူလိုက်သည် မနောကံသည်သာ အပြစ်အကြီးဆုံး ဖြစ်ကြောင်း အဖြေအပေါ်တွင်လည်း စောဒကတက်ရန် အားသန်ခဲ့လေ၏။
ထိုသူတို့၏ စကားဝိုင်းတွင် နိကဏ္ဌတို့အား ကိုးကွယ်သည့် ဥပါလိ အမည်ရှိသည့် သူကြွယ်သည်လည်း အနီးအနားတွင် ရှိနေသဖြင့် ဒီဃတပဿီနှင့် မြတ်စွာဘုရားရှင်တို့ ပြောဆိုခဲ့သည့်အပေါ် စိတ်ဝင်စားကာ သူကိုယ်တိုင် မြတ်စွာဘုရားရှင်ထံသွား၍ မိမိဆရာများ ယူဆသည့်အတိုင်း ကာယဒဏ်သာ အပြစ်အကြီးဆုံးဖြစ်ပြီး မနောကံသည် အပြစ်အကြီးဆုံး မဟုတ်ကြောင်း ဆွေးနွေးပြောဆိုကာ နောက်ဆုံးတွင် နိကဏ္ဌဆရာများ၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဥပါလိသူကြွယ်သည် ဘုရားထံမှောက် ရောက်ရှိခဲ့လေတော့၏။
ဘုရားထံမှောက် ရောက်လာခဲ့သည့် ဥပါလိသူကြွယ်သည် မြတ်စွာဘုရားရှင်အား နှုတ်ခွန်းဆက်စကား ပြောကြားပြီးနောက် ဒီဃတပဿီနှင့် ပြောဆိုခဲ့သည့် စကားများနှင့် စပ်လျဉ်းပြီး “အရှင်ဂေါတမ ကြီးကျယ်သော ကာယဒဏ်ကို ထောက်ဆ၍ သေးငယ်သော မနောဒဏ်သည် အဘယ်မှာ ပြောပလောက်မည်နည်း…၊ အမှန်အားဖြင့် ကာယဒဏ်သည်သာ မကောင်းပြုခြင်း၊ မကောင်းမှုဖြစ်ခြင်း၌ ကြီးကျယ်သော အပြစ်ရှိ၏၊ ၀စီဒဏ်နှင့် မနောဒဏ်သည် ထိုကဲ့သို့ မကြီးကျယ်ပါ…”ဟု လျှောက်ထားလေ၏။ ထိုအခါ မြတ်စွာဘုရားရှင်က ဥပါလိသူကြွယ်အား ထိုအကြောင်းအရာနှင့် ပတ်သက်၍ ဥပမာဥပမေယျများ ပြောဆိုရှင်းပြကာ ဆွေးနွေးဟောကြားလေ၏။
“သူကြွယ်… ဥပမာတစ်ခု ပေးကြစို့၊ သေချာနားထောင် စဉ်းစားလေလော့၊ နိကဏ္ဌတစ်ယောက်ဟာ အနာရောဂါ ပြင်းစွာနှိပ်စက်နေပြီး ရေအေးကိုပယ်ကာ ရေးနွေးကိုသာ သုံးဆောင်သူတစ်ယောက် ဖြစ်သည်ဟု ဆိုကြပါစို့၊ နောက်ဆုံးသူသည် ရေနွေးကို မရသဖြင့် ထိုရေးနွေးကို စွဲလန်းပြီး သေခဲ့သည်ရှိသော် သူသည် အဘယ်အရပ်မှာ ဖြစ်မည်ဟု သင်ထင်သနည်း”
“အရှင်ဂေါတမ… စိတ်စွဲလန်း၍ ဖြစ်သော နတ်မည်သည် ရှိပါ၏၊ ထိုနတ်မျိုးတို့၌ နိကဏ္ဌသည် ဖြစ်နိုင်ပါ၏”
“အရှင်ဘုရား… စိတ်စွဲလန်း၍ သေသောကြောင့် ဖြစ်ပါသည်ဘုရား…”
ထိုအခါ မြတ်ဗုဒ္ဓက ဥပါလိ၏ စကားသည် ရှေ့နောက်မညီဖြစ်နေကြောင်း၊ ရှေ့ကကာယဒဏ်သည်သာ အပြစ်အကြီးဆုံးဟုဆိုပြီး ယခုမူ စိတ်စွဲလန်း၍ဖြစ်ကြောင်း ဆိုနေသဖြင့် ရှေ့နောက်အစပ် လွဲနေကြောင်း မိန့်တော်မူသော်လည်း ဥပါလိကား “အရှင်ဘုရား… ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကာယဒဏ်သည်သာ အပြစ်အကြီးဆုံးပဲ”ဟုသာ ထပ်ခါထပ်ခါ ဆိုနေပြန်သဖြင့် မြတ်ဗုဒ္ဓက နောက်ထပ်ဥပမာပြ၍ ရှင်းပြရလေ၏။
“သူကြွယ်… ဥပမာထပ်ဆိုကြစို့…၊ အကယ်၍ နိကဏ္ဌတစ်ယောက်သည် အလုံးစုံသော ရေးအေးကိုပယ်ခြင်း၊ အလုံးစုံသော မကောင်းမှုကို တားမြစ်ခြင်း၌ အားထုတ်ခြင်း၊ မကောင်းမှုကို တားမြစ်ခြင်းဖြင့် ခွါထွက်ခြင်း၊ မကောင်းမှုကို တားမြစ်ခြင်းဖြင့် ပြန်နှံ့ခြင်းဟူသည့် စောင့်စည်းခြင်းလေးမျိုးကို စောင့်စည်းရင်း ရှေ့နောက်စင်္ကြံလျှောက်စဉ် သတ္တ၀ါအချို့အား နင်းမိပြီး သေကြေပျက်စီးခြင်းသို့ ရောက်ခဲ့မည်ဆိုလျှင် သူ့အား မည်သို့သော အကျိုးများ ဖြစ်ထွန်းနိုင်သနည်း…”
“အရှင်ဘုရား… နိကဏ္ဌသည် စေ့ဆော်ခြင်း စေတနာမပါသဖြင့် ကြီးမားသော အပြစ်မရှိပါ”
“သူကြွယ် ထိုစေတနာကို နိကဏ္ဌသည် အဘယ်ဒဏ်ဟု ပညတ်သနည်း”
“အရှင်ဘုရား မနောဒဏ်ဟု သတ်မှတ်ပါ၏”
ထိုအခါ မြတ်ဗုဒ္ဓက ဥပါလိ၏ အဖြေသည် ရှေ့နောက်မညီကြောင်း ကာယဒဏ်သည် အပြစ်အကြီးဆုံးဟု ဆိုသော်လည်း ယခုမူ မနောဒဏ်ဟု ဆိုနေကြောင်း မိန့်ဆိုရှင်းပြသော်လည်း ဥပါလိသည် ကာယဒဏ်ဟုသာ ဆက်လက်၍ ငြင်းဆိုနေပြန်သဖြင့် နောက်ထပ်ဥပမာ ပေးရပြန်လေ၏။
“သူကြွယ်… ဥပမာတစ်ခု ထပ်ပြုကြစို့…၊ ဤနာလန္ဒမြို့သည် စည်ပင်ဝပြောပြီး တိုးတက်ထွန်းကား လူစည်ကားသည် ဖြစ်သည် မဟုတ်လော..၊ အကယ်၍ ယောက်ျားတစ်ယောက်သည် သန်လျက်ကိုကိုင်ပြီး ဤမြို့တွင် ရှိသည့် သတ္တ၀ါအားလုံးကို ချက်ချင်းသေကြေပျက်ဆီး ပျောက်ဆုံးသွားအောင် လုပ်မယ်ဆိုရင် လုပ်နိုင်ပါသလော…”
“အရှင်ဘုရား… ယောက်ျားဆယ်ယောက်ဖြစ်စေ၊ နှစ်ဆယ်ဖြစ်စေ၊ သုံးဆယ်ဖြစ်စေ၊ ငါးဆယ်ဖြစ်ပါစေ ဤနာလန္ဒမြို့နှင့် သတ္တ၀ါအားလုံးကို တစ်ခဏချင်း သေကြေပျက်ဆီးပြီး ပြာပုံဖြစ်သွားအောင်ကား ဘယ်လိုမှ မလုပ်နိုင်ပါဘုရား..”
“သူကြွယ်… စိတ်တန်ခိုးအဘိညဉ် ဈာန်အစုံစုံ ပြည့်စုံသည့် သမဏဗြဟ္မဆိုရင်ကော ဒီမြို့ကို ပြာကျအောင် လုပ်နိုင်သလော…”
“အရှင်ဘုရား… စိတ်တန်ခိုးနှင့်ပြည့်စုံလျှင်ကား နာလန္ဒ တစ်မြို့တည်းပင်မဟုတ်၊ ဆယ်မြို့၊ နှစ်ဆယ်သုံးဆယ်၊ ငါးဆယ်ဆိုလည်း လုပ်နိုင်ပါ၏..”
ထိုအခါ မြတ်ဗုဒ္ဓက ဥပါလိသူကြွယ်၏ စကားသည် ရှေ့နောက်မညီကြောင်း ပြောဆိုရပြန်၏။ သို့သော် ဥပါလိက ကာယဒဏ်သည်သာ အပြစ်အကြီးဆုံးဟု ဆိုသဖြင့် နောက်ထပ်ဥပမာဖြင့် ရှင်းပြန်ရပြန်၏။ နောက်ဆုံး၌် အမျိုးမျိုး ဥပမာပေးကာ ဟောပြောရှင်းပြသည့် အခါတွင်ကား ဥပါလိက “အရှင်ဘုရား အကျွန်ုပ်သည် မြတ်စွာဘုရားရှင်၏ ပမထဆုံး ဥပမာနှင့်ပင် ဘုရားစကားတော်ကို နှစ်သက်ပြီး ဖြစ်နေပါပြီ၊ သို့သော် အကျွန်ုပ်သည် မြတ်စွာဘုရားရှင်၏ ဤဆန်းကျယ်သော ပြဿနာ ဖြေကြားတော်မူခြင်းကို ကြားနာလို၍သာ မြတ်စွာဘုရားရှင်ကို ဆန့်ကျင်ဘက်ကဲ့သို့ မထီမဲ့မြင် ပြုတော်မူခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါသည်ဘုရား..၊ အရှင်ဘုရား… အလွန်နှစ်သက်ဖွယ်ရှိပါ၏၊ ၀မ်းမြောက်ပါ၏၊ မှောက်ထားသည့်အိုးကို လှန်လိုက်သကဲ့သို့ ဖြစ်ပါ၏” စသည်ဖြင့် ဖြေကြားလျှောက်ထားကာ ဥပါသကာအဖြစ် ခံယူသွားခဲ့လေတော့၏။ (မဇ္ဈိမပဏ္ဏာသပါဠိတော်၊ ဥပါလိသုတ်)
ဤကား ဥပါလိသုတ်လာ နိကဏ္ဌတပည့်များနှင့် မြတ်စွာဘုရားရှင်တို့၏ အယူဝါဒဆိုင်ရာ ပြဿနာအချို့မှ ကောက်နှုတ်တင်ပြချက်များ ဖြစ်ပါ၏။ ဤဆွေးနွေးချက်များအရ နိကဏ္ဌတို့သည် မကောင်းမှုအကုသိုလ် တစ်ခုခု ကျူးလွန်ရာတွင် ဒဏ်ကြောင့်ဟုဆိုလေ့ရှိပြီး ကာယဒဏ်၊ ၀စီဒဏ်၊ မနောဒဏ်တို့တွင် ကာယဒဏ်သည်သာ အပြစ်အကြီးဆုံးဖြစ်ကြောင်း ပညတ်သတ်မှတ်သော်လည်း မြတ်ဗုဒ္ဓသည် ကံဟုသတ်မှတ်ပြီး ကာယကံ၊ ၀စီကံ၊ မနောကံဟူသည့် ကံသုံးပါတွင် မနောကံသည်သာ အပြစ်အကြီးဆုံး ဖြစ်ကြောင်း နာလည်သဘောပေါက်နိုင်ပေ၏။
မြတ်ဗုဒ္ဓအလိုတော်အရ မနောကံသည်သာ အပြစ်အကြီးဆုံး ဖြစ်သဖြင့် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များ အနေဖြင့်လည်း မနောကံကို အထူးထိန်းသိမ်း စောင့်ရှောက်သင့်၏။ မနောကံဟုဆိုရာတွင်လည်း စေတနာကို ဆိုခြင်းဖြစ်သဖြင့် အကောင်ဖြစ်စေ၊ အဆိုးဖြစ်စေ စေတနာပါလျှင် ကံမြောက်ပြီး အကျိုးသက်ရောက်မှု ဖြစ်နိုင်သဖြင့် ကောင်းသည့်အလုပ်များတွင် စေတနာ အပြည့်ပါစေရန်လိုအပ်ပြီး မကောင်းသည့် အလုပ်များတွင်ကား မလွဲသာ၍ လုပ်လိုက်ရသော်လည်း စေတနာမပါစေရန် အထူးဆင်ခြင်သင့်လှပေ၏။ မကောင်းသည့်အလုပ်ဟူသည် မလုပ်ဘဲနေနိုင်လျင် ကောင်းသော်လည်း လုပ်မိပါက အပြစ်နည်းစေရန် စေတနာမပါမိစေဖို့ အထူးသတိပြုသင့်ပေ၏။
ဤ၌ မည်သူမည်သူတို့၏ အယူအဆဟု သီးသန့်မပြောဘဲ ကံနှင့်ဒဏ်ဟူသည့် စကားလုံး သက်သက်ကိုသာ ပြောကြည့်မည်ဆိုပါက ဒဏ်ဟူသည် ယနေ့ခေတ်အခေါ် ပြစ်မှုဒဏ်၊ အပြစ်ဒဏ်ကို ရည်ညွှန်းခြင်း ဖြစ်သဖြင့် စေတနာပါသည့် အကုသိုလ်ကံကို လုပ်မိလျှင် မကောင်းသည့် အပြစ်ဒဏ်ကို ခံရတတ်ကြောင်း လိုသလိုစွဲယူ နားလည်သဘောပေါက်နိုင်ပေ၏။ မည်သို့ပင်ဆိုစေ မနောကံနှင့်ပတ်သက်၍ ကျူးလွန်မှု ဖြစ်ခဲ့လျှင် မနောဒဏ်ကိုလည်း ခံနိုင်ဖွယ်ရှိသဖြင့် ကံမှသည် ဒဏ်အဖြစ်သို့ မရောက်မိကြစေရန် မိမိမိမိတို့၏ စေတနာကို ကောင်းသည့်ကံများတွင် အပြည့်အ၀ အသုံးချပြီး မကောင်းသည့် ကံများတွင် မပါမိစေရန် သတိပြု ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်သင့်ကြောင်း ကံနှင့်ဒဏ်အကြောင်း တစ်စေ့တစ်စောင်း ဆက်စပ်တင်ပြလိုက်ရပါသည်။
။ အချိန် 6/19/2010 12:46:00 PM
ဒီနေ့ခေတ် ဗုဒ္ဓဘာသာအများ အလှူလှူတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး လွဲနေတာလေးတွေ ရှိပါတယ်။ တစ်ချို့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေဟာ အလှူလှူတာထက် ဂုဏ်ယူတာတွေက များနေတာကို တွေ့ရတတ်ပါတယ်။ တောရွာတွေမှာဆို ပိုဆိုးပါတယ်။ အလှူလုပ်တာ အကြွေးအတင်ခံပြီးတော့ကို လုပ်တတ်တာတွေပါ။ ဘုန်းဘုန်းတို့ ငယ်ငယ်တုန်းက ရှင်ပြုတုန်းကလည်း ဘုန်းဘုန်းတို့ ညီအစ်ကိုတွေ ရှင်ပြုပွဲ ကြီးကြီးကျယ်ကျယ် လုပ်နိုင်ဖို့ ဒကာကြီးက အိမ်ကလယ်တွေကိုတောင် ပေါင်ပြီး အကြွေးအတင်ခံ ချေးငှါးပြီး လှူတာကို သတိရမိပါတယ်။ ဒီနေ့အထိပဲ တောရွာတွေမှာ အလှူလုပ်ပြီဆိုရင် ဂုဏ်တုဂုဏ်ပြိုင်တွေ ဆိုင်းတွေ၊ အငြိမ့်တွေနဲ့ သူ့ထက်ငါ အပြိုင် လှူနေကြတာကို တွေ့ရတတ်ပါတယ်။ အလှူပွဲပြီးလို့ ကိုယ်လှူတဲ့ အလှူအကြောင်း ပြန်စဉ်းစားလိုက်ရင် ကုသိုလ်တစ်ပဲ ငရဲက တစ်ပိဿာ ဆိုသလို ဖြစ်နေကြတာကို တွေ့ရပြန်ပါတယ်။ ခုနောက်ပိုင်း မြို့တွေမှာလည်း တစ်ချို့က ဘယ်နေရာမှာမ၊ ဘယ်လိုနာမည်ကြီး အဖွဲ့တွေနဲ့မှ စသဖြင့် ဂုဏ်တုဂုဏ်ပြိုင် သဘောတွေက အများကြီး ဖြစ်နေတာကို တွေ့ရပြန်ပါတယ်။
ပိုဆိုးတာက အလှူလုပ်ပြီး ကုသိုလ်စိတ်နဲ့ ပီတိတိုးရမယ့်အစား အကြွေးတွေ၊ ဟိုပြဿနာ၊ ဒီပြဿနာတွေ၊ ဟိုကိစ္စ၊ ဒီကိစ္စတွေ တွေးရင်း ဒီအလှူပွဲကြီး လုပ်လိုက်မိတာ မှားပါလားဆိုတဲ့ နောင်တ ရမှုမျိုးတွေ ဖြစ်နေတာက ပိုဆိုးပါတယ်။ အလှူလှူပြီးနောက်ပိုင်းမှာ ဖြစ်ရမယ့် ၀မ်းမြောက်မှုပီတိနဲ့အတူ ပြည့်စုံရမယ့် အပရစေတနာက မပြည့်စုံတော့ဘဲ အလှူကြောင့် ရခဲ့တဲ့ နောင်တကြောင့် စေတနာသုံးတန် မပြဋ္ဌာန်းနိုင်တာက မလိုအပ်တဲ့ ချဲ့ထွင်မှု ဂုဏ်ပကာသနတွေရဲ့ ရလာဘ်တစ်ခု ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ အလှူကြီးလှူပြီး စေတနာသုံးတန် မပြဋ္ဌာန်းနိုင်တဲ့အတွက် အကျိုးတရား အပြည့်မရတဲ့အခါ ကုသိုလ်တစ်ပဲ ငရဲတစ်ပိဿာဆိုတာ ဖြစ်ကုန်ပါတော့တယ်။ ဒါကြောင့် အလှူလှူတာကို အလှူနဲ့တူအောင် လှူနိုင်ဖို့ မလိုအပ်တဲ့ ချဲ့ထွင်မှုတွေနဲ့ ငါဘယ်လောက်လှူနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ ဂုဏ်တုဂုဏ်ပြိုင်မှုတွေနဲ့ မလှူမိကြဖို့ ဆိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
တကယ်ဖြစ်သင့်တာက အလှူလှူတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်က ဒါနမြောက်ဖို့နဲ့ စည်းစိမ်ဥစ္စာတွေအပေါ်မှာ တပ်မက်တတ်တဲ့ လောဘ၊ မပေးလို မလှူလိုမှု မစ္ဆရိယတွေ လျော့နည်းအောင် လှူနိုင်ဖို့ ကြိုးစားတဲ့ အလှူမျိုး ဖြစ်သင့်ပါတယ်။ ဘယ်လောက်လှူနိုင်တာ၊ ဘယ်လိုလှူနိုင်တာက အရေးမကြီးဘဲ လိုအပ်တဲ့နေရာမှာ တတ်နိုင်တဲ့ အတိုင်းအတာနဲ့ စေတနာသုံးတန် ပြဋ္ဌာန်းနိုင်အောင် လှူတတ်ဖို့နဲ့ လှူနိုင်သမျှ အတိုင်းအတာ အလျောက် ကိုယ့်သန္တာန်မှာ လောဘတွေ၊ မစ္ဆရိယတွေ လျော့နည်းနိုင်မှုက ပိုပြီးအရေးကြီးပါတယ်။ ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲများနဲ့ အလှူပွဲကြီး ခြိမ့်ခြိမ့်သဲသဲ ကျင်းပနိုင်တာထက် တိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ် အေးအေးချမ်းချမ်းနဲ့ လိုအပ်တဲ့နေရာမှာ၊ လိုအပ်တဲ့အရာကို လှူရင်း တရားလည်းနာ၊ ၀ဋ်ကင်းပြတ်ရာကိုလည်း အာရုံပြုနိုင်တဲ့ အလှူမျိုး လှူနိုင်တာက အဓိကကျပါတယ်။ မလိုအပ်တဲ့ ချဲ့ထွင်မှုတွေနဲ့ အလှူရှင်မှန်းသိအောင် မဏ္ဍပ်တိုင် တက်ပြတာထက် အကျဉ်းချုံးပြီး ကိုယ်လှူတာကိုယ်သိတဲ့ ပုံစံမျိုးနဲ့ ဂုဏ်တုဂုဏ်ပြိုင်မရှိ ကိုယ့်ကိုယ်ကို နှိမ့်ချစွာ လှူနိုင်တာက အလှူအကျိုးပိုကြီးနိုင်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် အလှူလုပ်လိုတာထက် ဂုဏ်တုဂုဏ်ပြိုင် လုပ်ချင်တာတွေက ပိုများတတ်တဲ့ မြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာ အချို့အနေနဲ့ အလှူလှူတာနဲ့ ဂုဏ်ယူတာကို ကွဲပြားအောင် ခွဲခြားပြီး ပြိုင်ဆိုင်မှုမပါ၊ ဂုဏ်ပကာသနမဖက်ဘဲ ရှိသမျှအတိုင်း အတာလေးနဲ့ စေတနာသုံးတန် ပြဋ္ဌာန်းပြီး လှူနိုင်သမျှ လှူရင်း လောဘနဲ့ မစ္ဆရိယကို လျော့နည်းစေကာ ၀ဋ်ဒုက္ခမှ ကင်းလွှတ်တဲ့ အလှူလုပ်မှုမျိုး ဖြစ်အောင် ကြိုးစားသင့်ကြောင်း လွဲတတ်တာလေးတွေကို သတိချပ်နိုင်ဖို့ အသိပေးစကား ပြောကြားလိုက်ရပါတယ်။
။ အချိန် 6/17/2010 11:19:00 AM
“အပြောလွယ်သလောက် အလုပ်ခက်၏”ဟူသော မြန်မာစကားရှိ၏။ လောကတွင် အပြောလွယ်သော်လည်း လက်တွေ့လုပ်ရန်ကား ခက်ခဲတတ်ကြောင်း ဆိုလိုရင်း ဖြစ်၏။ အပြောနှင့် အလုပ်ထပ်တူကျရန် မလွယ်လှသည့် သဘောကို ညွှန်းဆိုလိုဟန် ရှိ၏။ ပြောသူကိုယ်တိုင်လည်း မိမိပြောသည့်အတိုင်း မလုပ်နိုင်သည်များ ရှိသဖြင့် အချို့က “ငါပြောသလိုလုပ် ငါလုပ်သလို မလုပ်နဲ့ (Do as I say not as I do.)” ဟု ဆိုလေ့ရှိကြ၏။ စင်စစ် ပုထုဇင်များ ဖြစ်နေကြသဖြင့်လည်း အပြောနှင့်အလုပ် ထပ်တူကျနိုင်ရန် မလွယ်လှပေ။ အချို့မှာ အပြောကောင်းသော်လည်း အလုပ်မကောင်းဖြစ်တတ်ပြီး အချို့ကား အပြောမကောင်း၊ အပြောကြမ်းသော်လည်း အလုပ်ကောင်းပြီး အကောင်းလုပ်သည်များလည်း ရှိတတ်၏။ အချို့က အပြောလည်းမကောင်း အလုပ်လည်း မကောင်းဖြစ်တတ်ပြီး အချို့ကား အပြောလည်းကောင်း အလုပ်လည်း ကောင်းသူများ ရှိတတ်ပြန်၏။
ဤ၌ အပြောကောင်းခြင်းဟူသည် ချိုသာသည့် အပြောအဆိုအသုံးအနှုန်းများ၊ မြောက်ပင့်ပြောဆိုသည့် အသုံးအနှုန်းများ၊ လိမ်ညာပြောဆိုသည့် အသုံးအနှုန်းများဖြင့် အပြောကောင်းခြင်းကို ဆိုလိုသည်မဟုတ်၊ အကုသိုလ်မဖြစ်အောင် ပြောဆိုတတ်ခြင်းကို ဆိုလို၏။ အလုပ်လည်း ထို့အတူပင် အကုသိုလ်မဖြစ်၊ အပြစ်မဖြစ်သည့် အလုပ်များကို လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက် နေခြင်းကိုပင် အလုပ်ကောင်းသည်ဟု ဆိုလို၏။
အပြောကောင်းခြင်း အကောင်းပြောခြင်းနှင့် အလုပ်ကောင်းခြင်း အကောင်းလုပ်ခြင်းတို့သည် တစ်ထပ်တည်း ဖြစ်ရန် မဖြစ်နိုင်ကြပေ။ မိမိကိုယ်တိုင် မိမိ၏အပြောနှင့်အလုပ် ထပ်တူမကျနိုင်သကဲ့သို့ သူတစ်ပါးအပေါ်တွင်လည်း အပြောနှင့်အလုပ် ထပ်တူဖြစ်ရန် မလုပ်ပေးနိုင်ကြပေ။ တစ်ခုမဟုတ် တစ်ခု ချို့ယွင်းနေကြမည်သာ ဖြစ်၏။ အချို့က မိမိကိုယ်တိုင်က အပြောနှင့် အလုပ်ထပ်တူ မဖြစ်သော်လည်း သူတစ်းပါးတို့အား ထပ်တူဖြစ်စေလိုကြ၏။ သူတစ်ပါးတို့အား ‘ဘယ်လိုပြော ဘယ်လိုလုပ်’ စသည်ဖြင့် အမိန့်ပေး ညွှန်ပြတတ်သော်လည်း မိမိကိုယ်တိုင်ကား ထိုသို့ မလုပ်နိုင်သည်ကို တွေ့ရတတ်၏။ ထို့ကြောင့် ပညာရှိများက “သူတစ်ပါးတို့အား မိမိ၏ အယူဝါဒများကို လက်ခံလိုက်နာအောင် ပြောဆိုညွန်ပြနိုင်၊ သူတစ်ပါးတို့အား အပြောနှင့်အလုပ် ထပ်တူဖြစ်အောင် ဆုံးမသွန်သင်နိုင်သော်လည်း မိမိကိုယ်တိုင်ကား မိမိညွန်ပြ ဆုံးမသည့်အတိုင်း လက်ခံလိုက်နာ နေထိုင်ရန်မှာ ခဲရင်းလှသည်”ဟု ဆိုခြင်းဖြစ်၏။
မြတ်စွာဘုရားရှင် လက်ထပ်က ပဓာနိကတိဿအမည်ရှိ မထေရ်တစ်ပါး ရှိ၏။ ထိုမထေရ်သည် ဘုရားရှင်အထံတော်မှ ကမ္မဋ္ဌာန်းတရား အားထုတ်နည်းကို သင်ယူပြီး အခြားသော ရဟန်းငါးရာတို့နှင့်အတူ တောတွင်းတစ်နေရာတွင် ၀ါဆိုဝါကပ်မှုကို ပြုလေ၏။ ပဓာနိကတိဿ မထေရ်သည် မထေရ်ကြီး ဖြစ်သည့်အားလျော်စွာ အခြားရဟန်းတော်များအား ပြောဆိုဆုံးမတော်မူ၏။ ပဓာနိက တိဿမထေရ်က “ငါ့ရှင်တို့… အရှင်ဘုရားတို့ဟာ သက်တော်ထင်ရှား ဘုရားရှင်ထံက ကမ္မဋ္ဌာန်းတရားကို သင်ယူခဲ့တဲ့အတွက် အဲဒီကမ္မဋ္ဌာန်းကို မမေ့မလျော့တဲ့ သတိနဲ့ အားသွန်ခွန်စိုက် ကြိုးစားအားထုတ်ကြရမှာ ဖြစ်တယ်၊ ကြိုးစားအားထုတ်ဖို့လည်း တိုက်တွန်းပါတယ်…” စသည်ဖြင့် အခြားသော ရဟန်းတို့အား အလုပ်ကောင်းရန် ပြောဆိုတိုက်တွန်းတော်မူ၏။
သို့သော် သိူကိုယ်တိုင်ကား ကမ္မဋ္ဌာန်းတရား အားထုတ်ခြင်း မရှိဘဲ ကျောင်းတွင်းသို့ သွားရောက်၍ လဲလျောင်းအိပ်စက်တော် မူလေ့ရှိ၏။ အခြားသော ရဟန်းတို့ကား ည၏ ပထမယာမ်တွင် စကြံလျှောက်ကာ တရားမှတ်ပြီး မဇ္ဈိမယာမ်တွင် ကျောင်းတွင်းသို့ ၀င်ကြကုန်၏။ ထိုအခါ ပဓာနိက မထေရ်သည် အိပ်ရာမှ နိုးလာပြီး အခြားသော ရဟန်းတို့ထံ သွားရောက်ကာ “အရှင်ဘုရားတို့က တရားအားမထုတ်ဘဲ အိပ်ပဲအိပ်နေတာပဲ…”ဟု ပြောဆိုကာ တရားအားထုတ်ခိုင်းပြီး သူကိုယ်တိုင်ကား ကျောင်းတွင်ပြန်ဝင်ကာ အိပ်စက်လေ၏။ အခြားရဟန်းတို့သည် မစ္ဇျိမယာမ်တွင် စင်္ကြံလျှောက် တရားအားထုတ်ပြီး ပစ္ဆိမယာမ်ခေါ် ည၏ နောက်ဆုံးအချိန်တွင် ကျောင်းတွင်းသို့ ၀င်ကြလေ၏။ ထိုအခါတွင်လည်း ပဓာနိကမထေရ်သည် အိပ်ရာမှ နိုးလာပြီး ရှေ့နည်းအတိုင်းပင် ပြောဆိုလေ၏။
ဤသို့ဖြင့် နေ့စဉ်ပြောဆိုလာသည့်အခါ နောက်ဆုံးတွင် အခြားသော ရဟန်းများမှာ တရားအားထုတ်၍ မရနိုင်ဘဲ စိတ်အစဉ် မတည်မငြိမ်ဖြစ်၍သာ နေပေ၏။ ထိုသို့ ဖြစ်သည့်အခါ မိမိတို့၏ ဆရာမထေရ်ဖြစ်သည့် ပဓာနိက မထေရ်သည် မည့်သို့မည်ပုံ အားထုတ်နေသည်ကို သိရှိလိုလာသဖြင့် တိတ်တဆိတ် စုံးစမ်းသည့်အခါ တရားအားမထုတ်ဘဲ အိပ်စက်ပြီးသာ နေလေ့ရှိသည့်အဖြစ်ကို သိရပြီး “ငါ့ရှင်တို့… ငါတို့ကား ရေလိုက်လွဲသွားခဲ့ကြပြီ၊ ငါတို့ဆရာကား ငါတို့အား အချည်းနှီးသာ မြည်တွန်ပြောဆိုပြီး သူကိုယ်တိုင်က ဘာတရားမှ အားမထုတ်ဘဲ နေနေပေတယ်” စသည်ဖြင့် ပြောဆိုကာ အလွန်ပင်ပန်းလျက် တရားတစ်စုံတစ်ရာ မရဘဲ ထိုဝါတွင်းကို ကုန်လွန်ခဲ့ရတော့၏။ ၀ါကျွတ်၍ ဘုရားရှင်ထံ အဖူးအမျှော် ရောက်ကြသည့်အခါ ဘုရားရှင်က တရားအားထုတ်မှု အဆင်ပြေ၊ မပြေ မေးမြန်းသဖြင့် ဖြစ်ကြောင်းကုန်စင်ကို လျှောက်ထားပြလေ၏။
ထိုအခါ မြတ်စွာဘုရားရှင်က “သူတပါးကို ဆုံးမသော နည်းအတိုင်း မိမိကိုယ်တိုင် လိုက်နာပြုကျင့်ရာ၏။ မိမိကိုယ်တိုင် ယဉ်ကျေးပြီးသော်မှသာ သူတပါးကို ဆုံးမရာ၏၊ မိမိကိုယ်ကို ယဉ်ကျေးအောင် ဆုံးမရခြင်းသည် ခဲယဉ်းလှစွာတကား..”ဟူ၍ တရားစကား ဟောကြားတော်မူလေ၏။ ထိုဒေသနာတော်၏ အဆုံးတွင် ရဟန်းငါးရာတို့သည် အရဟတ္တဖိုလ်၌ တည်လေ၏။ (ဓမ္မပဒ၊ အတ္တ၀ဂ်၊ ပဓာနိကတိဿမထေရ် ၀တ္ထု)
အထက်ပါ ဒေသနာတော်တွင် ပဓာနိက မထေရ်၏ လုပ်ရပ်နှင့် မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ ဟောကြားချက်များသည် ဆင်ခြင်သင့်ပြီး လိုက်နာသင့်သည့် အချက်ပင် ဖြစ်၏။ ပဓာနိကမထေရ်၏ လုပ်ရပ်များအတိုင်း မိမိတို့အနေဖြင့် မလုပ်မိရန် သတိပြု ဆင်ခြင်သင့်ပြီး မြတ်ဗုဒ္ဓ မိန့်တော်မူသည့်အတိုင်း လိုက်နာကျင့်သုံးသင့်၏။ ပဓာနိက မထေရ်သည် အပြောသာရှိပြီး အလုပ်မရှိသည်ကို တွေ့ရ၏။ အပြောကောင်းပြီး အလုပ်မကောင်းသည်ကို သိမြင်နိုင်၏။ မြတ်ဗုဒ္ဓသည် ထိုသို့သော လုပ်ရပ်မျိုးကို အားမပေးပေ။ မြတ်ဗုဒ္ဓကား အပြောနှင့်အလုပ် ထပ်တူဖြစ်စေလို၏။ မည်သူမဆို သူတစ်ပါးတို့အား ပြောဆိုဆုံးမှုမပြုမီ မိမိကိုယ်တိုင် ရှေးဦးစွာ မိမိပြောဆိုဆုံးမသည့်အတိုင်း ပြုမူစေလို၏။ မိမိကိုယ်ကို ယဉ်ကျေးအောင် ကျင့်ကြံနေထိုင်ပြီးမှသာ အခြားသူများကို ဟောပြောပေးစေလို၏။ ဆိုလိုသည်မှာ အပြောနှင့်အလုပ် ထပ်တူဖြစ်စေလိုခြင်းပင် ဖြစ်၏။
သို့သော် မျက်မှောက်ခေတ်တွင်ကား အပြောနှင့် အလုပ်ထပ်တူ မဖြစ်သူများ အများအပြား ရှိနေပေ၏။ အပြောတစ်ခြား အလုပ်တစ်ခြားဖြင့် အမှားမှား ဖြစ်နေသူများ ရှိ၏။ မိမိကိုယ်တိုင်ကား အမှားလုပ်နေ၊ မကောင်းသည်များကို လုပ်နေသော်လည်း အခြားသူများကိုကား အကောင်းလုပ်စေလို၊ အမှန်လုပ်စေလိုကြ၏။ အထူးသဖြင့် မိသားစု အသိုင်းအ၀ိုင်းများတွင် ထိုကိစ္စများ မကြာခဏ ဖြစ်လေ့ရှိတတ်၏။ အဖေကိုယ်တိုင်က အရက်ကလေးတမြမြ ဖဲကလေးတစ်စစဖြင့် မဟုတ်သည့် လုပ်ရပ်များဖြင့် ကျင်လည်နေသော်လည်း သားသမီးများကိုကား အမှားတစ်ခုခု လုပ်မိလျှင် ဆူပူကြိမ်းမောင်းကာ ရိုက်နှက်ဆုံးမတတ်သည် အထိ ပြုတတ်သည့် ဖခင်များ ရှိ၏။ ထိုဖခင်များသည်ကား အထက်မှာ ပြောခဲ့သကဲ့သို့ ငါပြောသလိုလုပ် ငါလုပ်သလို မလုပ်နှင့်ဆိုသည့် ဖခင်များသာ ဖြစ်နေပေ၏။
စင်စစ်ထိုသို့ မဖြစ်သင့်ပေ။ မိဘဖြစ်စေ၊ ဆရာသမားများဖြစ်စေ သားသမီများ၊ တပည့်များအား ဆုံးမပြောဆို သွန်သင်မှုကို ပြုကြမည်ဆိုလျှင် ရှေးဦးစွာ မိမိကိုယ်တိုင် မိမိကိုယ်ကို ပြုပြင်ကာ မိမိ၏ အပြောနှင့်အလုပ် ထပ်တူဖြစ်စေရန် အားထုတ်သင့်၏။ မိမိကိုယ်တိုင် မိမိပြောသည့်အတိုင်း လက်တွေ့လိုက်နာ နေထိုင်မှုကို ပြုပြပြီးမှသာ သားသမီးများ၊ တပည့်များအား ပြောဆိုဆုံးမပြုသင့်၏။ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာ မိန့်မှာတော်မူ သကဲ့သို့ မိမိ၏သားသမီး၊ တပည့်များအား ဆုံးမသည့်အတိုင်း မိမိကိုယ်တိုင် လိုက်နာပြုကျင့်ပြီးမှသာ သူတပါးတို့အား ဆုံးမသွန်သင်မှုကို ပြုသင့်ပေ၏။ သို့မှသာ အပြောခံရသူ၊ အဆုံးမခံရသူများသည် မိဘစကား၊ ဆရာ့စကားအား ရိုသေမှုနှင့် လက်ခံလိုက်နာကြမည် ဖြစ်ပါ၏။
စကားစပ်၍ ဒကာတစ်ယောက်အကြောင်း သတိရမိသေး၏။ ထိုဒကာသည် မကောင်းသတင်းများဖြင့်သာ ထင်ရှားလေ့ရှိသည့် ဒကာဖြစ်၏။ မကောင်းမှုတွင် ပျော်ပါးလေ့ရှိသူ တစ်ယောက်ဖြစ်၏။ သို့သော် သူသည် မိမိကိုယ်တိုင်ကား မဟုတ်သည်များဖြင့် ကျင်လည်လေ့ရှိသော်လည်း အခြားသူများအား “ဟိုဟာမလုပ်ဖို့၊ ဒါမဟုတ်ဖို့၊ ဟိုလိုမနေဖို့၊ ဒီလိုမနေဖို့” စသည်ဖြင့် ပြောဆိုလေ့ရှိသည်ဟု ဆို၏။ သူတပါးအား မည်မျှပင် ပြောဆိုနေသော်လည်း မိမိကိုယ်တိုင်ကား မဟုတ်သည်များဖြင့် ကျင်လည်နေသူ ဖြစ်သဖြင့် သူ့စကားအား မကင်းရာမကင်းကြောင်း မကောင်းတတ်သဖြင့်သာ ရှေ့တွင် နားထောင်တတ်သော်လည်း ကွယ်ရာတွင် မကောင်းပြောနေကြသည်က များနေပေ၏။ ထိုဒကာသည် ထိုသဘောကို မသိဘဲ မိမိကိုယ်တိုင်က မကောင်းသည့်အလုပ်များဖြင့် နေလေ့ရှိသော်လည်း အခြားသူများအား ဤသို့ဤပုံ ပြုမူရန်သာ ပြောဆိုမြဲ ပြောဆိုနေလေ့ရှိ၏။ သူ့အဖြစ်ကိုကြည့်ကာ ဤကဲ့သို့သော သူများကြောင့် မြတ်စွာဘုရားရှင်က “သူတပါးကို ဆုံးမသော နည်းအတိုင်း မိမိကိုယ်တိုင် လိုက်နာပြုကျင့်ရာ၏”ဟု ဟောတော်မူခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သဘောပေါက်မိ၏။
ဆိုလိုသည်မှာ အခက်တကာ အခက်ဆုံးတို့တွင် မိမိကိုယ်ကို ပြုပြင်ဆုံးမရန်မှာ အခက်ဆုံး ဖြစ်သည်ဟု ဆိုကြသကဲ့သို့ လက်တွေ့ဘ၀တွင်လည်း မိမိကိုယ်ကို အပြောလည်းကောင်း အလုပ်လည်းကောင်းပြီး အပြောနှင့် အလုပ်ထပ်တူ ဖြစ်ရန်မလွယ်လှကြောင်း ဆိုလိုရင်း ဖြစ်ပါ၏။ ထိုသို့ မလွယ်လှသဖြင့်လည်း သူတပါးတို့အား ပြောဆိုဆုံးမမှု မပြုမီ မိမိကိုယ်ကို ရှေးဦးစွာ ယဉ်ကျေးအောင် ပြုပြင်နေထိုင်သင့်ကြောင်း ပြောလိုရင်း ဖြစ်၏။ မိမိကိုယ်တိုင် အပြောနှင့်အလုပ် ထပ်တူဖြစ်ရန် ကြိုးစားသင့်ကြောင်း ဆိုလိုရင်း ဖြစ်ပါ၏။
မည်သို့ပင်ဆိုစေ လောကတွင် အပြောနှင့်အလုပ် တစ်ထပ်တည်းကျရန် မလွယ်လှသော်လည်း ကြိုးစားအားထုတ်မှုဖြင့် တစ်ဖြည်းဖြည်း ပြုပြင်ကြမည်ဆိုလျှင် မဖြစ်နိုင်သည့်အရာဟူသည် မရှိနိုင်သဖြင့် ရှေးဦးစွာ မိမိကိုယ်ကို၊ တစ်နည်းအားဖြင့် မိမိစိတ်ကို ပြုပြင်ကြည့်ကြရန် ဖြစ်ပါ၏။ သူတပါးတို့အား မပြောဆိုမီ မိမိကိုယ်တိုင် မိမိဖြစ်စေချင်သည့်အတိုင်း လက်တွေ့လိုက်နာ ကျင့်သုံးပြရန် လိုအပ်ပေ၏။ မိမိပြောသည့်အတိုင်း မိမိကိုယ်တိုင် နေထိုင်နိုင်ရန် ကြိုးစားသင့်ပေ၏။ သို့မှသာ မိမိသည်လည်း အပြောကောင်း အလုပ်ကောင်းသူတစ်ဦး ဖြစ်လာမည်ဖြစ်ပြီး မိမိကို အမှီပြုကြသူများသည်လည်း မိမိပြောသည့်အတိုင်း လက်ခံလိုက်နာကြမည်သာ ဖြစ်ပါ၏။
ထို့ကြောင့် မည်သူမဆို သူတပါးတို့အား မည်သို့မည်ပုံ ပြုလုပ်နေထိုင်ရန် ပြောဆိုနိုင်သော်လည်း မိမိကိုယ်တိုင်ကား မိမိပြောသကဲ့သို့ လိုက်နာကျင့်သုံးရန် မလွယ်ကူလှသဖြင့် သူတပါးတို့အား မပြောကြား ရှေးဦးစွာ မိမိကိုယ်တိုင် အပြောကောင်းပြီး အလုပ်ကောင်းသူများ ဖြစ်စေရန်၊ မိမိ၏ အပြောအလုပ်များသည် အပြစ်ကင်းသည့်အပြော၊ အပြစ်ကင်းသည့် အလုပ်များ ဖြစ်စေရန်၊ အပြောနှင့်အလုပ် ထပ်တူဖြစ်စေရန် ကြိုးစားရင်း မိမိကိုယ်ကို ယဉ်ကျေးအောင် ဆုံးမရန်ခက်ခဲလှသည့် အဖြစ်မှ ကင်းလွှတ်ပြီး ဆုံးမလွယ်သူ အဖြစ်ဖြင့် မိမိ၏အပြောနှင့် မိမိ၏အလုပ် အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်သာ ကြိုးစားကြပါဟု စေတနာစကားဖြင့် အသိပါး လိုက်ရပေတော့၏။ အာလုံး အကောင်းပြော၍ အကောင်းလုပ်နိုင်ကြပါစေ…
။ အချိန် 6/15/2010 10:37:00 AM
။ အချိန် 6/13/2010 11:41:00 AM
။ အချိန် 6/11/2010 11:28:00 AM
တစ်လောက ကျောင်းမှာအလှူပွဲ ရှိတဲ့အချိန် ကိုရီးယားတစ်ချို့လည်း ရောက်လာပါတယ်။ အလှူပွဲဆိုတော့ သိတဲ့အတိုင်း လာသမျှလူတွေကို ဖွယ်ဖွယ်ရာရာ အားရပါးရ ကျွေးမွေးဧည့်ခံကြတာပေါ့။ ဒီလိုလှူတာ၊ တမ်းတာကျွေးမွေး ဧည့်ခံတာတွေ တွေ့ရတော့ ကိုရီးယားဧည့်သည်တွေထဲမှ တစ်ချို့က အံ့သြကြပါတယ်။ ဘာသာမရှိတာလည်း ပါသလို သူတို့ဆီမှာ အလကားရတာ၊ အလကားပေးတာဆိုတာ ဘာမှမရှိတဲ့အတွက် ခုလိုအလကား ပေးကျွေးနေတာတွေ လက်တွေ့မြင်ရတော့ ထူးဆန်းနေတာလည်း ပါမှာပေါ့။ ဒါနဲ့ပဲ မသိတာတွေ နားမလည်တာတွေ တစ်ခုပြီး တစ်ခုမေးပါတော့တယ်။ ဘာဖြစ်လို့ ဒီလိုပေးလှူကြတာလဲ…၊ ဗုဒ္ဓဘာသာမှာ ဒီလို ပေးနေရင်ကိုပဲ အားလုံးပြီးပြည့်စုံပြီးလား..၊ ဒီလို ပေးလှူခြင်းရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်က ဘာလဲ…စသဖြင့် မေးခွန်းတွေက စုံလှပါတယ်။
သူတို့မေးမယ်ဆိုလည်း မေးချင်စရာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် အများစုဟာ တကယ်ပဲ အလှူဒါနပြုရတာကို သဘောကျကြပါတယ်။ ရှိလို့ကတော့ လူမယ်ဆိုတာချည်းပါပဲ။ အထူးသဖြင့် မြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာ အများစု ရှာဖွေစုဆောင်းကြတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်တွေထဲမှာ စားဝတ်နေရေးအတွက် ပါသလို လှူဖို့တန်းဖို့အတွက်လည်း ပါပါတယ်။ အလှူပေးရတာကို သဘောကျသလို လှူနေရတာကိုလည်း ဂုဏ်ယူလေ့ရှိပါတယ်။ တစ်ဘက်ကလည်း အလှူရှင်မှန်းသိအောင် မဏ္ဍာပ်တိုင် တက်ပြတာလည်း ၀ါသနာပါပြန်ပါတယ်။ ဘယ်မှာဘယ်လိုဘယ်လောက် လှူထားတယ်ဆိုတာကိုလည်း အမြဲဂုဏ်ယူလေ့ ရှိပါတယ်။ အလှူပေးတာကို သဘောကျတဲ့စိတ်က ကောင်းပေမယ့် အလှူနဲ့ပတ်သက်ပြီး ကြွားတာဝါတာတွေကတော့ ပြုပြင်ရမယ့် အပိုင်းတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်တစ်ချက်က အလှူဒါနလုပ်တာ လုပ်သင့်တဲ့ ကုသိုလ်ကောင်းမှု တစ်ခုဖြစ်ပေမယ့် ဒီလိုအလှူပေးတာ တစ်ခုတည်းနဲ့တော့ ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ နောက်ဆုံးပန်းတိုင်အထိ သွားဖို့မဖြစ်နိုင်သလို ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေ အဓိကလုပ်သင့်တဲ့ ကုသိုလ်ကတော့ မဟုတ်သေးပါဘူး။ ဒါနအလုပ်ဟာ နတ်ရွာလားကြောင်း၊ သုဂတိရောက်ကြောင်း အကျင့်ကောင်းတစ်ခု ဖြစ်ပေမယ့် ဒါနသက်သက်နဲ့တော့ နောက်ဆုံးပန်းတိုင်ဖြစ်တဲ့ နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်း လမ်းစဉ်တော့ မဟုတ်သေးပါဘူး။ ဒါကြောင့် ဒါနလုပ်တာကောင်းပေမယ့် ဒါနတစ်ခုတည်းအားကောင်းပြီး ကျန်တဲ့အဓိကကျတဲ့ ကုသိုလ်တွေ အားမကောင်းဘူး၊ မလုပ်နိုင်သေးဘူး ဆိုရင်တော့ မကောင်းပြန်ပါဘူး။
ဗုဒ္ဓဘာသာကပြောတဲ့ ကုသိုလ်လုပ်ရမယ်လို့ ဆိုရာမှာ ဒါနကုသိုလ်၊ သီလကုသိုလ်၊ ဘာဝနာကုသိုလ်ဆိုတဲ့ ကုသိုလ်အမျိုးအစား သုံးမျိုးလုံးကို ဆိုလိုပါတယ်။ ဗုဒ္ဓဘာသာတွေရဲ့ နောက်ဆုံးပန်းတိုင်ဖြစ်တဲ့ နိဗ္ဗာန်ရောက်ရေးကတော့ ဘာဝနာကုသိုလ် အထူးသဖြင့် ၀ိပဿနာ အလုပ်ကို လုပ်မှကို ရောက်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ နိဗ္ဗာန်မရခင် ဘ၀သံသရာ ခရီးကို ကျင်လည်ရတဲ့အခါ သုဂတိဘ၀ကို ရောက်နိုင်ရေး နံပါတ်တစ်အရေးကြီးပြီး အဲဒီသုဂတိဘ၀မှာ ချမ်းချမ်းသာသာ နေနိုင်ရေးဟာ ဒုတိယ အရေးကြီးပါတယ်။ ဆိုတော့ကား ဒီဘ၀နိဗ္ဗာန် မရနိုင်သေးရင်တော့ အရင်ဆုံး ငရဲ၊ တိရိစ္ဆာန်၊ ပြိတ္တာ၊ အသူရကာယ်ဆိုတဲ့ အပါယ်လေးဘုံကို မလားရောက်ရရေး ဦးစားပေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဘ၀သေပြီး အပါယ်မလားဖို့ အတွက်ကတော့ သီလကုသိုလ်ရှိမှ ဖြစ်မှာပါ။ သီလလုံခြုံမှ အပါယ်မသွားရေး အာမခံနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ သီလလုံခြုံရင် အပါယ်မသွားနိုင်ပေမယ့် သုဂတိဘ၀မှာ ချမ်းချမ်းသာသာ ရှိရေးလည်း လိုအပ်လာပြန်ပါတယ်။ ဒီအတွက် ဒါနကုသိုလ်ကို လုပ်ပေးရခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလို သီလလုံပြီး ဒါနပါ ပါမယ်ဆိုရင်တော့ သုဂတိဘ၀မှာ ချမ်းချမ်းသာသာ ရှိစေမှာ အမှန်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
သေချာတွေးကြည့်မယ်ဆိုရင် ဗုဒ္ဓဘာသာများအတွက် လုပ်သင့်လုပ်ထိုက်တဲ့ ကုသိုလ်များဟာ သူ့အပိုင်းနဲ့သူ အကုန်လိုအပ်တဲ့ ကုသိုလ်ရေးတွေပဲ ဆိုတာ အလွယ်တကူ သိရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒါနကုသိုလ်၊ သီလကုသိုလ်၊ ဘာဝနာ ကုသိုလ်ဆိုတဲ့ ကုသိုလ်သုံးမျိုးမှာ ပုထုဇင်ပုဂ္ဂိုလ်များအတွက် အခြေခံအကျဆုံးနဲ့ အရေးအကြိးဆုံးက သီလကုသိုလ်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သီလလုံခြုံရေးဟာ နံပါတ်တစ် ဦးစားပေးဖြစ်ပြီး စွမ်းနိုင်လို့၊ ပါရမီရှိလို့ နိဗ္ဗာန်အထိ အရောက်လှမ်းနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ ဘာဝနာကုသိုလ်ကို ထပ်ဆင့်ကြိုးစား လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဘာဝနာ အလုပ်တောင်မှ သီလကိုအရင်ဆုံး လုံခြုံအောင်၊ သီလဖြူစင်အောင် အရင်ဆုံးလုပ်ပြီးမှ ဘာဝနာနဲ့သွားတာ ပိုထိရောက်တဲ့ သဘောရှိပါတယ်။ သီလမလုံခြုံဘဲ ဘာဝနာအလုပ် အားထုတ်နေရင်တော့ ၀ိပဿနာဉာဏ်ရဖို့ မလွယ်လှပါဘူး။ သီလဖြူစင်မှ စိတ်ဖြူစင်ပြီး စိတ်ဖြူစင်မှ သမာဓိဖြစ်ကာ သမာဓိရှိမှ ဉာဏ်တက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုဆိုရင် ဒါနကုသိုလ်ရဲ့ အခန်းကဏ္ဍဟာ စည်းစိမ်ဥစ္စာချမ်းသာရေး တစ်ခုကိုပဲ လုပ်ပေးနိုင်စွမ်း ရှိတယ်ဆိုတာ ရှင်းနေပါတယ်။ ဒါနသက်သက်နဲ့ကတော့ အပါယ်မလားရေးကို မတားပေးနိုင်သလို ဒါနမပါပြန်ရင်လည်း သုဂတိဘ၀ ရနေပေမယ့် ဆင်းရဲတဲ့ဘ၀နဲ့ နေနေရတဲ့ အဖြစ်နဲ့ ကြုံတွေ့နိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် မြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာအများ ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ ဒါနကုသိုလ်ဟာ လုပ်နိုင်ရင် ကောင်းပေးမယ့် ဒါနသက်သက်နဲ့တော့ အလုံးစုံ ပြည့်စုံပြီလို့ ယူဆလို့ မရဘူးလို့ ဆိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ဒါနလုပ်ခြင်းဖြင့် ဒါနရဲ့ လက်တွေ့အကျိုးတွေကတော့ ခံစားရတတ်ပါတယ်။ ပေးကမ်းလှူဒါန်းတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ဟာ အရင်ဆုံး သဒ္ဓါတရားရှိမှ ပေးနိုင်ကမ်းနိုင်တာ ဖြစ်လို့ သဒ္ဓါတရားတွေ တိုးစေနိုင်သလို မိမိမှာရှိတဲ့ အရာကို စွန့်လွတ်တာ ဖြစ်တဲ့အတွက် မပေးလိုမလှူလိုတဲ့ ၀န်တိုမှု မစ္ဆရိယကို တိုက်ခိုက်တွန်းလှန်နေတာ ဖြစ်လို့ ကုသိုလ်တရားတွေလည်း တိုးစေတတ်ပါတယ်။ ပြီးတော့ ပေးကမ်းလှူဒါန်းတဲ့သူဟာ လူချစ်လူခင်၊ နတ်ချစ်နတ်ခင်များပြီး ပေးကမ်းတဲ့အတွက် အောင်မြင်မှုကိုလည်း ရစေပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အလှူပေးတဲ့အတွက် ချမ်းသာမှုကိုလည်း ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ ဒီလို အကျိုးတွေ ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်လည်း မြန်မာအများစုဟာ ဒါနပြုရတာကို သဘောကျတာ ဖြစ်ပါတယ်။
တစ်ဘက်က ပြန်တွေးကြည့်ရင်လည်း ဒါနဟာ တစ်ခြားကုသိုလ်တွေထက် လုပ်ရတာ ပိုလွယ်တဲ့ အတွက်ကြောင့်လည်း ကျန်တဲ့ကုသိုလ်တွေ မလုပ်တာထက်စာရင် ဒါနလေးလောက်တော့ လုပ်မှဆိုတဲ့ အတွေးလေးတွေနဲ့ လုပ်နေကြတာလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ကျန်တဲ့ သီလကုသိုလ်၊ ဘာဝနာကုသိုလ်တွေကတော့ လက်တွေ့ကျင့်ကြံ အားထုတ်၊ စောင့်စည်းမှသာ ရနိုင်တဲ့အတွက် သဒ္ဓါပညာဝိရိယ တရားများ အားနည်းလာတဲ့ ဒီနေ့ခေတ်မှာ အကျင့်တရားနဲ့ လက်တွေ့အားထုတ်ဖို့ထက် ရှိတာလေးကို ပေးကမ်းစွန့်ကြဲပြီး လှူဒါန်းလိုက်တာက ပိုပြီးလွယ်ကူထင်ပေါ်တဲ့ အတွက်ကြောင့် ဒါနလုပ်တာကို ပိုပြီး သဘောကျကြခြင်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
မှန်ပါတယ်။ ဒီနေ့ခေတ်မှာ ကျင့်ကြံအားထုတ် ထိန်းသိမ်းဖို့ဆိုရင် မလုပ်ချင်ကြတော့ဘဲ ဖြစ်ကုန်ပါတော့တယ်။ သီလလည်း မထိန်းချင် ဘာဝနာလည်း မလုပ်ချင်ဖြစ်ကုန်ပါတယ်။ ကျန်တာတွေ မပြောနဲ့ တရားနာဖို့ကိုတောင် မလုပ်ချင်ကြတော့ပါဘူး။ ဘုန်းဘုန်းကျောင်းမှာ အပတ်စဉ် တနင်္ဂနွေနေ့တွေမှာ အလှူပွဲရှိရင် တစ်ချို့ကလေးတွေက ဝေယျာဝစ္စလုပ်ရတာ၊ ညလုံးပေါက်ချက်ပြုတ်ရတာ၊ ဘုန်းကြီးဆွမ်းကပ်ရတာ၊ လာသမျှလူတွေကို ကြွေးမွေးဧည့်ခံရတာတွေဆို အပင်ပန်းခံပြီး တစ်ညလုံး မအိပ်မနေ လုပ်တတ်ကြပေမယ့် တရားနာ ရေစက်ချတော့မယ်ဆိုရင် ကြက်ပျောက်ငှက်ပျောက်ကို ပျောက်ကုန်တတ်ကြပါတယ်။ တစ်ခါတစ်လေ ဘုန်းဘုန်းတရားဟောတာပဲ မကောင်းလို့လား၊ ဒါမှမဟုတ် တရားဟောတာပဲ ကြာလို့လားလို့ တွေးကြည့်စဉ်းစားကြည့်တော့လည်း တရားဟောတာ အလွန်ဆုံး မိနစ်သုံးဆယ်လောက်ပဲ ရှိပါတယ်။ တရားဟောဘယ်လောက်ပဲ ကောင်းကောင်း တရားနာကြမယ်ဟေ့ဆို ရှိကိုမရှိတော့ဘဲ အကျင့်ပါပြီး ပျောက်ပျောက်သွားပါတော့တယ်။ သူတို့ကို မေးကြည့် ဒါနလုပ်မလား တရားနာမလားဆို ဒါနပဲလုပ်ကြမယ့် သူတွေများပါတယ်။ ဒါနလုပ်ရတာက လွယ်တာကိုး။ လှူဖွယ်ဝတ္တုကလည်း အဆင်သင့်ရှိနေတော့ ဒါနဆိုရင် အချိန်မရွေး လုပ်နေနိုင်တဲ့ သဘောရှိနေတာကိုး။
အဲ… သီလစောင့်ဖို့၊ တရားအားထုတ်ဖို့ ဆိုရင်တော့ အဲဒါ ရန်သူပဲ။ မျက်မှောက်ခေတ် ဗုဒ္ဓဘာသာမှာ မသိတာတွေ များလာတယ်ဆိုတာ အကျင့်တရားအားနည်းပြီး အလွယ်လိုက်နေတာတွေကြောင့်လည်း ပါပါတယ်။ လက်တွေ့ကျင့်ကြံအားထုတ်မှ ရတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာမှာ အကျင့်တရားက အဓိကဖြစ်နေပေမယ့် အကျင့်တရားနဲ့နေဖို့ မလုပ်နိုင်တဲ့အခါကျတော့ ဗုဒ္ဓဘာသာဟာ ဖာသိဖာသာ၊ မသိမသာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေ များကုန်တော့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုသဒ္ဓါ၊ ပညာ ၀ိရီယတရား ယုတ်လျော့လာတာတွေကြောင့်လည်း ဗုဒ္ဓဘာသာများဟာ သီလ၊ဘာဝနာ ကုသိုလ်တွေထက် ဒါနကုသိုလ်မှာ ပိုပြီးလုပ်ကြ၊ ဒါနလုပ်ရတာကို ပိုပြီးနှစ်သက်ကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘာမှမလုပ်တာထက် စာရင် ဒါနလေးလုပ်တာက တော်သေးတယ်ဆိုတဲ့ အတွေးများနဲ့ ဒါနလေးတွေတော့ ရသမျှ လုပ်နေကြတာ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ဒါနလုပ်တာ မကောင်းလို့လားဆိုတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ကောင်းပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဓိကကျတဲ့ သီလ၊ ကုသိုလ်နဲ့ ဘာဝနာကုသိုလ်တွေကို ပိုပြီး ကြိုးစားအားထုတ်သင့်ပါတယ်။ ဒါနတွေ ဘယ်လောက်ပဲလုပ်လုပ် သီလမလုံခြုံရင် မကောင်းတဲ့ဘုံတွေမှာ ပြန်ဖြစ်နိုင်သလို၊ ဘာဝနာ မပါပြန်ရင်လည်း လွတ်မြောက်မှုနဲ့ အလှမ်းဝေးနေပြန်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အဓိကကျတဲ့ သီလကို လုံအောင်ထိန်းပြီး ဒါနလေးနဲ့ရံကာ ဘာဝနာပါတွဲလိုက်ကြဖို့ အထူးသတိပေး တိုက်တွန်းရခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ သီလလုံမှ ဒါနအကျိုးပေး ကောင်းနိုင်သလို သီလလုံမှလည်း ဘာဝနာဉာဏ် အဖြစ်မြန်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒါနလုပ်တာ ကောင်းပေမယ့် ဒါနတစ်ခုတည်းတော့ မကောင်းနိုင်ဘူးလို့ ဆိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ သီလ၊ ဘာဝနာပါတွဲကြဖို့ အသိပေးလိုရင်း ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် ဒီနေရာမှ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ ပြောလိုတာက ဒါနလုပ်တာကောင်းပေမယ့် ဒါနတစ်ခုတည်းနဲ့ပဲ ကျေနပ်မနေကြဘဲ သီလရော၊ ဘာဝနာပါ ပေါင်းပြီး လုပ်နိုင်အောင် ကြိုးစားပါလို့ ပြောလိုရင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဖြစ်သင့်တာက သီလကို အရင်လုံအောင်ထိန်းပြီး ဒါနကောင်းမှုနဲ့ ဘာဝနကောင်းမှုကို ရနိုင်သမျှ ကြိုးစားပြီး လုပ်နိုင်အောင် အားထုတ်တာက အဖြစ်နိုင်ဆုံး၊ အကောင်းဆုံးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သီလလုံရင် အပါယ်လုံပြီး ဒါနပါရင် ချမ်းသာလာကာ ဘာဝနပွားရင် ကိလေသာပါးမှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် ဒါနတစ်ခုတည်းကိုပဲ အားမပြုကြပဲ သီလကို အခြေခံတဲ့ ဒါန၊ ဘာဝနာတွေပါ လုပ်နိုင်အောင် ကြိုးစားအားထုတ်ကြည့်ကြပါလို့ စေတနာစကား ပါးလိုက်ရပါတယ်။ အားလုံး သီလခြုံပြီး ဒါနစုံနဲ့ ဘာဝနာထုံနိုင်ကြပါစေ
။ အချိန် 6/10/2010 10:41:00 AM
ပြီးခဲ့တဲ့ တစ်ရက်နှစ်ရက်က MBC သတင်းဌာနက လွှင့်သွားတဲ့ TV သတင်းတစ်ပုဒ်ကို ကြည့်ရှုနားထောင်ရင်း ဆေးရုံက လူနာတစ်ယောက် ကိုယ့်ကိုယ်သတ်သေသွားတဲ့ သတင်းတစ်ပုဒ်ကို အထူးသတိပြု မိလိုက်ပါတယ်။ ဒီသတင်းနဲ့ဆက်စပ်ပြီး သတင်းကြေငြာသူက “ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာ အခုလို ကိုယ့်ကိုယ်ကို သတ်သေမှုများ မကြာခဏ ဖြစ်လေ့ရှိကြောင်း၊ အခုလူနာဟာလည်း ဆေးရုံမှာ ရောက်နေပြီး လာရောက်ကြည့်ရှု အားပေးသူမရှိ တစ်ယောက်တည်း အထီးကျန်ဖြစ်ကာ စိတ်ဝေဒနာပါ ခံစားရလို့ ခုလို အဆုံးစီရင်သွားတာ ဖြစ်နိုင်ကြောင်း၊ ဒီလို ကိုယ့်ကိုယ်ကို သတ်သေသွားတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး လေ့လာသုံးသပ်ချက် စစ်တမ်းအရ ကိုးရီးယားနိုင်ငံမှာ မနှစ်က တစ်နှစ်တည်းကိုပဲ ကိုယ့်ကိုယ်ကို သတ်သေသွားသူပေါင်း တစ်သောင်းလေးထောင်ခန့်ရှိပြီး တစ်နေ့ကို (၃၈)ယောက်နှုန်းခန့် ရှိကြောင်း၊ အဆုံးစီရင်သူတွေထဲမှာ စိတ်ရောဂါတစ်ခုခုကြောင့် သတ်သေသူ အရေအတွက်က ပိုများကြောင်း…” စသဖြင့် သေဆုံးမှုနဲ့ ဆက်စပ်တဲ့ သတင်းကို ကြေငြာသွားပါတယ်။
ဒီသတင်းနားထောင်ပြီး ဘုန်းဘုန်းစိတ်မှာ အတွေးပေါင်းစုံ ရောက်လာပြန်ပါတယ်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပြန်သတ်ခြင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ရောက်တတ်ရာရာ တွေးနေမိရာက ဗုဒ္ဓစာပေမှာလာတဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပြန်သတ်တတ်တဲ့ အရာများအကြောင်း သတိရမိလိုက်ပါတယ်။ ငှက်ပျောသီး၊ ၀ါးသီး၊ ကျူသီး၊ အဿတိုရ်မြင်းမရဲ့ ကိုယ်ဝန်နဲ့ ပူဇော်သက္ကာရတွေဟာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပြန်သတ်စေတဲ့ အရာတွေ ဖြစ်ကြောင်း သံယုတ်ပါဠိတော် ဒေ၀ဒတ္တသုတ်မှာ ပါရှိပါတယ်။ ငှက်ပျောသီးဟာ ငှက်ပျောပင်ကို ပြန်သတ်ကြောင်း၊ ၀ါးသီးက ၀ါပင်ကို ပြန်သတ်ကြောင်း၊ ကျူသီးက ကျူပင်ကို ပြန်သတ်ကြောင်း၊ အဿတိုရ်မြင်းမရဲ့ ကိုယ်ဝန်က သူ့ကိုပြန်သတ်ကြောင်း၊ ပူဇော်သက္ကာများက အလိုဆိုးရှိတဲ့သူမိုက်ကို ပြန်သတ်တတ်ကြောင်း ဒီသုတ်မှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ဣတိဝုတ်ပါဠိတော်မှာတော့ ကျူသီးဟာ ကျူပင်ကို ပြန်သတ်သလို လောဘ၊ ဒေါသ၊ မောဟဆိုတဲ့ အကုသိုလ် ဖြစ်ကြောင်း အခြေခံတရားတွေက ပုထုဇင်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကို ပြန်သတ်တတ်ကြောင်း ဥပမာပေးပြီး ဟောပေးထားတာ ရှိပါတယ်။ ပြီးတော့ ဓမ္မပဒ တိဿတ္ထေရ၀တ္ထုမှာလည်း သံချေးဟာ သံကိုအမှီပြု ဖြစ်လာပြီး သံကိုပင် ပြန်ဖျက်သလို၊ မကောင်းမှုအမှုကို ကျူးလွန်ကျင့်ကြံသူကိုလည်း အဲဒီမကောင်းမှုက မကောင်းတဲ့ ဒုဂ္ဂတိဘ၀ရောက်အောင် ပြုလုပ်တတ်ကြောင်း ဖော်ပြပါရှိပါတယ်။ ဒါဟာ ဗုဒ္ဓစာပေမှာလာတဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပြန်သတ်တတ်တဲ့ အရာတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီစာပေမှာ လာတဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပြန်သတ်တဲ့အရာတွေကို ဖတ်ပြီး ဘုန်းဘုန်းတို့ ငယ်ငယ်က ဘုန်းဘုန်းတို့ အိမ်ခြံဝန်းထဲမှာ စိုက်ထားတဲ့ ၀က်မလွတ် ငှက်ပျောခိုင်များ ခုတ်တုန်းက အဖြစ်လေးကို ပြန်မြင်ယောင်မိပါသေးတယ်။ ငှက်ပျောခိုင်ခုတ်ပြီး ငှက်ပျောပင်ပါ တစ်ခါတည်း ခုတ်လှဲပစ်တဲ့ ခမည်းတော် ဒကာကြီးကို ကလေးအတွေးနဲ့ “အဖေ ဘာဖြစ်လို့ ငှက်ပျောပင်ကိုပါ ခုတ်ပစ်လိုက်တာလဲ…”လို့ မေးတော့ “ငှက်ပျောဆိုတာ တစ်ခါပဲသီးတာ၊ တစ်ခါသီးပြီးတာနဲ့ အဲဒီအပင် နောက်မသီးတော့ဘူး၊ မသီးမယ့်အတူတူ ခုတ်လှဲပစ်တာက ပြီးရောပေါ့၊ မခုတ်လည်း သူ့ဟာသူသေမှာပဲ၊ အဲဒါပဲပေါ့ကွ.. သူ့အတက်က သူ့ကိုယ်ပြန်စူးတယ်ဆိုတာ၊ ဒီငှက်ပျောသီးကြောင့် ငှက်ပျောပင်လည်း သေရတာပဲ”လို့ ဒကာကြီးက ရှင်းပြပေမယ့် အဲဒီတုန်းက ကလေးဘ၀ဆိုတော့ ကောင်းကောင်း သဘောမပေါက်ခဲ့မိပါဘူး။
ခုဗုဒ္ဓစာပေအဖွင့်တွေ သိရတော့မှပဲ ငှက်ပျောတင်မဟုတ်၊ ကျူး၊ ၀ါးတွေလည်း ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပြန်သတ်တတ်တဲ့ အကြောင်း၊ အဿတိုရ်မြင်းကို ကိုယ်ဝန်ဆောင်တဲ့ မြင်းမကျပြန်တော့လည်း အဿတိုရ်ဟာ အာဇာနည်မြင်း ဖြစ်တဲ့အတွက် ဒီမြင်းကို မွေးပြီး မိခင်မြင်းမဟာ သေလေ့ရှိတဲ့အတွက် သူလည်း ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပြန်သတ်တဲ့ သဘောရှိတဲ့အကြောင်း၊ အထူးသဖြင့် ပူဇော်သက္ကာရက ဒီအပေါ်မှာ စိတ်ထားမတတ်ရင် ဒီပူဇော်သက္ကာရကပဲ အပူဇော်ခံပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ စိတ်ကိုဖျက်စီးပြီး လောဘ၊ ဒေါသ၊ မောဟတရားတွေနဲ့ ပစ္စုပ္ပန် သံသရာ ကောင်းကျိုးတွေကို သတ်ပစ်တတ်တဲ့အကြောင်း၊ ပြီးတော့ သံချေးဟာ သံကိုအမှီပြု ဖြစ်ခဲ့ပေမယ့် နောက်ဆုံးတော့ အဲဒီသံကို သံချေးကပဲ ပြန်ဖျက်သလို မကောင်းမှု အကုသိုလ်ကျင့်တဲ့သူကို အဲဒီမကောင်းမှုကပဲ မကောင်းတဲ့အဖြစ်ကို ရောက်စေတတ်ကြောင်း စသဖြင့် ကောင်းကောင်း သဘောပေါက်မိခဲ့ပါတယ်။
ဒီစာပေ အဖွင့်တွေ ကြည့်လိုက်တော့ လူတွေဟာ အသတ်လွဲနေတာပါလားလို့ စဉ်းစားနေမိပါသေးတယ်။ အကြောင်းကြောင့် အကျိုးဖြစ်တဲ့သဘောမှာ အကြောင်းကို မသတ်ဘဲ အကျိုးကို လိုက်သတ်နေကြပါလားလို့ တွေးနေမိပါတယ်။ သူတို့လုပ်သလို ကိုယ်ကိုယ်ကို ပြန်သတ်လိုက်ရုံနဲ့ ပြီးသွားပြီး နောက်ထပ်ဘ၀ မရှိတော့ဘူးဆိုရင်တော့ တစ်မျိုးပေါ့။ မပြီးသေးဘူးဆိုရင်တော့ ဒီဘ၀သတ်လို့ သေသွားလည်း နောက်ဘ၀ထပ်ဖြစ်ဦးမှာပါပဲ။ အဲလို ထပ်ဖြစ်တဲ့အခါကျမှ ဒီဘ၀ထက် နိမ့်ကျတဲ့ဘ၀ကို ရောက်သွားပြီဆိုရင်တော့ ကိုယ်ကမသတ်ရဘဲ ကိုယ့်ကိုသတ်သူတွေနဲ့ ထပ်တွေ့နေဦးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ လူ့ဘ၀ကြီးကို စိတ်ကုန်လို့ သတ်ပစ်လိုက်ကာမှ နောက်ပြန်ဖြစ်လာတဲ့ ဘ၀က တိရိစ္ဆာန်ဘ၀၊ ပြိတ္တာဘ၀ စတာတွေ ပြန်ဖြစ်လာခဲ့ရင်တော့ အထက်ပြန်တက်ဖို့ မလွယ်နိုင်သလို တိရိစ္ဆာန်ဘ၀ဆိုရင်လည်း သူများက သတ်ဖြတ်စားနေတာကို ခံရင်း နောက်ပြန်ဖြစ်၊ ပြန်ခံနဲ့ ပိုလို့တောင် ဆိုးနေပါဦးမယ်။
အမှန်တော့ တကယ်သတ်ရမှာက ကိုယ့်ကိုယ်ကို သတ်ရမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပြန်သတ်စေတဲ့ သူ့ကို သတ်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပြန်သတ်မှုကို ဖြစ်စေတဲ့ အကြောင်းတရားကို သတ်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဗုဒ္ဓစာပေမှာ လာတဲ့အတိုင်း ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပြန်သတ်စေတဲ့ အကြောင်းတွေ ဖြစ်တဲ့ လောဘ၊ ဒေါသ၊ မောဟတရားတွေကို သတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလောဘ၊ ဒေါသ၊ မောဟ တရားသုံးပါးဟာ ပုထုဇင်သတ္တ၀ါတွေကို အမျိုးမျိုးနှိပ်စက်ကာ အမျိုးမျိုးဒုက္ခပေးလေ့ ရှိတဲ့ ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်း တရားတွေဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဒုက္ခတွေ ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာ ဒီအကြောင်းတရားတွေကြောင့် ဖြစ်တဲ့အတွက် ဒုက္ခမဖြစ်ချင်ရင် အကြောင်းကို သတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ အကြောင်းသတ်မှ အကျိုးပြတ်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲလိုမှ မဟုတ်ဘဲ အကြောင်းကို မသတ်ဘဲ ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ အကျိုးကို သတ်နေလို့ကတော့ သစ်ပင်တစ်ပင်ကို သေအောင်သတ်တဲ့သူလို အမြစ်ကိုလှန်ပြီး သတ်ရမယ့်ဟာကို အမြစ်လှန် မသတ်ဘဲ အပေါ်အကိုင်းအခက်တွေပဲ လိုက်သတ်နေလို့ကတော့ သစ်ပင်ဟာ အညွန့်တလူလူနဲ့ ပိုလို့တောင် တက်ကောင်းနေသလို ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ အရေးကြီးတာက အမြစ်ကို သတ်မှ အကုန်သေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
လောဘအားကြီးလွန်းတဲ့အတွက် တစ်ချို့က လောဘနောက်ကိုလိုက်ရင်း အဆုံးမသတ်နိုင်ဖြစ်ပြီး လိုသလို မဖြစ်တဲ့အခါ မထူးပါဘူးဆိုကာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို သတ်လိုက်တဲ့ အဖြစ်၊ ဒေါသအားကြီးတဲ့ အတွက် ဒေါသအလျောက် စိတ်လိုက်မာန်ပါ လုပ်မိရာက အမှားများဖြစ်ပြီး နောက်ဆုံး ဒီဒေါသကြောင့်ပဲ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပြန်သတ်မိတဲ့အဖြစ်၊ မောဟအားကြီးတဲ့ အခါကျတော့လည်း အမှားအမှန်ကို မခွဲခြားနိုင်ဖြစ်ကာ အမှားကို အမှန်ထင်ပြီး လိုက်လုပ်မိရာမှ မထိန်းနိုင်မသိမ်းနိုင် ဖြစ်ကာ နောက်ဆုံး ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပြန်သတ်တဲ့အထိ ဖြစ်ကုန်တော့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ အရင်းစစ်တော့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပြန်သတ်ဖြစ်နေကြတာဟာ ဒီလောဘ၊ ဒေါသ၊ မောဟတရားများကြောင့်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် တကယ်သတ်ရမှာက ကိုယ့်ကိုယ်ကို မဟုတ်ဘဲ ကိုယ့်ကိုယ်တွင်းမှာရှိတဲ့ ဒီလောဘ၊ ဒေါသ၊ မောဟတရားတွေကို သတ်ရမှာလို့ ဆိုခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
တကယ်သတ်သင့်တဲ့ ကိုယ်တွင်းကိလေသာတွေကို မသတ်ဘဲ ရုပ်တရားဖြစ်တဲ့ ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကို သတ်နေလို့ကတော့ အလေ့ကျပေါက်တဲ့ မျက်ပင်တွေလို သတ်လေရှင်လေ၊ ဖြတ်လေတက်လေပဲ ဖြစ်နေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အမှန်တကယ် ဒုက္ခတွေကို ငြီးငွေ့လို့ ဒုက္ခငြိမ်းရာ ရောက်အောင် သတ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ခန္ဓာကိုယ် ရုပ်တရားတွေကို သတ်နေလို့ မရပါဘူး။ ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်တွင်းမှာ ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ လောဘ၊ ဒေါသ၊ မောဟစတဲ့ ကိလေသာတရားများကို သတ်မှတကယ့် ဒုက္ခငြိမ်းမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အပြင်ပိုင်းရုပ်တရားတွေကို သတ်ဖို့လွယ်ပေမယ့် အတွင်းကိလေသာ တရားများကိုတော့ သတ်ဖို့ခက်လှပါတယ်။ ဒီအတွင်း ကိလေသာတွေကို သတ်ဖို့အတွက်ကတော့ ဉာဏ်လက်နက်တစ်ခုနဲ့ပဲ သတ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။ ၀ိပဿနာအားထုတ်လို့ ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ ဉာဏ်လက်နက် တစ်ခုတည်းနဲ့ပဲ ဒီအတွင်း ကိလေသာတွေကို အမြစ်ပြတ် ချေမှုန်းသတ်ဖြတ်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပြန်သတ်ကြရာမှာ ကိုယ့်ရဲ့ရုပ်တရားကို ပြန်သတ်ဖို့ မဟုတ်ဘဲ အတွင်းမှာရှိတဲ့ ကိလေသာတရားတွေကို သတ်ရမှာလို့ ဆိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
ဆိုလိုတာက ဘ၀မှာ ဒုက္ခတွေ ဒီလောက်ဖြစ်နေတာ ဒီဘ၀ဒီခန္ဓာကြောင့်ဖြစ်ပြီး ဒီခန္ဓာမရှိရင်၊ ဒီအသက် သေသွားရင်၊ ဒီဘ၀ပြီးသွားရင် ပြီးတာပဲဆိုတဲ့ အတွေးတွေနဲ့ ဒုက္ခတွေငြိမ်းချင်၊ ဒုက္ခတွေက လွတ်မြောက်ချင်တဲ့ အတွက် ကိုယ့်ကိုယ်ကို သတ်သေကြသူတွေ အနေနဲ့ ခန္ဓာကိုယ် ရုပ်တရားကို သတ်နေရုံနဲ့ တကယ့်ဒုက္ခတွေ မငြိမ်းနိုင်ကြောင်း၊ တကယ်ဒုက္ခငြိမ်းချင်ရင် ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်း အကြောင်းတရားကို ရှာပြီး သတ်ရမှာဖြစ်ကြောင်၊ အကြောင်းမသတ်ဘဲ အကျိုးသတ်နေလို့ကတော့ သစ်ပင်ပန်းပင်လေးတွေကို အဖျားကနေဖြတ်ပြီး သေအောင်သတ်နေတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်လို သတ်လေရှင်လေသာ ဖြစ်နေမှာ ဖြစ်ကြောင်း စသဖြင့် ဆိုလိုရင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပြန်သတ်ချင်ရင်လည်း ကိုယ့်ကိုယ်တွင်းမှာရှိတဲ့ ကိလေသာတွေကို ပြန်သတ်နိုင်အောင် ကြိုးစားခြင်းကသာ တကယ့်အစစ်အမှန် သတ်နည်းဖြစ်ကြောင်း သဘောပေါက်စေလိုရင်း ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် ဘ၀မှာ ဒုက္ခပေါင်းစုံနဲ့ ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ နေရတဲ့သူတွေ အနေနဲ့ ဒီဒုက္ခတွေ အမှန်တကယ် ငြိမ်းလိုလို့် တစ်ဘ၀ တစ်ခါပြီးရင် ပြီးတာပဲ ဆိုတဲ့အတွေးနဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပြန်သတ်ကြခြင်းဟာ အမှန်တကယ် ဒုက္ခငြိမ်းရာ လမ်းစဉ်မဟုတ်ဘဲ ဒုက္ခရှည်ရာရှည်ကြောင်း ဖြစ်နေတဲ့အတွက် ဒီလို ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပြန်သတ်တာတွေက ရှောင်ကြဉ်ပြီး အမှန်တကယ် သတ်သင့်တဲ့ ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်း အကြောင်းတရား ကိလေသာများကို ဉာဏ်လက်နက်နဲ့ဖြတ်ကာ သတ်နိုင်အောင် ကြိုးစားခြင်းကသာ မှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းဖြစ်လို့ ဒီလမ်းစဉ်အတိုင်းသာ လျှောက်လှမ်းကြဖို့ တိုက်တွန်းလိုရင်း ဖြစ်ပါတယ်။ အကြောင်းကြောင့် အကျိုးဖြစ်တဲ့ သဘောမှာ အကြောင်းကို ရှာပြီး သတ်နိုင်မှသာ အကျိုးတရားလည်း ကင်းမှာဖြစ်တဲ့အတွက် ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်း အကြောင်းတရားများဖြစ်တဲ့ ကိလေသာတရားတွေကိုသာ ရှာပြီး သတ်ကြပါလို့ အကြံပြု တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်။ အားလုံး အသတ်မှန်လို့ အမှန်သတ်နိုင်ကြပါစေ..
။ အချိန် 6/09/2010 10:26:00 AM
ဓုတင်ဆိုတာ ဓုတင်္ဂဆိုတဲ့ ပါဠိစကားကို မြန်မာမှုပြုထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကိလေသာကို ဖျက်စီးကြောင်း ခေါင်းပါးသော အကျင့်လို့ အဓိပ္ပါယ်ကောက်ယူနိုင်ပါတယ်။ သူတော်ကောင်းများ အတွက် အလိုနည်းစေခြင်း၊ ရောင့်ရဲလွယ်စေခြင်း၊ ကိလေသာခေါင်းပါးစေခြင်း၊ ကြိုးစားအားထုတ်မှု ၀ီရိယရှိစေခြင်း၊ သီလစင်ကြယ်စေခြင်း စတဲ့ အကျိုးတရားများကို မျှော်ကိုးကာ ဗုဒ္ဓရှင်တော်မြတ်က ဒီဓုတင်အကျင့်ကို ခွင့်ပြုတော်မူခဲ့ပါတယ်။ ဓုတင်အကျင့်လို့ ဆိုတဲ့အတွက် ရဟန်းတော်များအတွက် သီးသန့်ခွင့်ပြုခဲ့တယ်လို့ ထင်စရာ ရှိပါတယ်။ အဲဒီလို မဟုတ်ပါဘူး။ ရဟန်း၊ သာမဏေ၊ လူပုဂ္ဂိုလ်အားလုံးကို ရည်ရွယ်ပြီး ကိုယ့်အနေနဲ့ သင့်လျော်မယ့်၊ ကျင့်လို့ရမယ့် ဓုတင်အကျင့်ကို ကျင့်နိုင်ဖို့ ခွင့်ပြုတော်မူခဲ့ပါတယ်။ အားလုံးအတွက် မြတ်ဗုဒ္ဓက ဓုတင်အကျင့် (၁၃)မျိုးကို ခွင့်ပြုတော်မူခဲ့ပါတယ်။
ဒီဓုတင် (၁၃)ပါးက ၁။ ပံသုကူလိကင်္ဂ ဓုတင် ၂။ တေစီဝရိကင်္ဂ ဓုတင် ၃။ ပိဏ္ဍပါတိကင်္ဂ ဓုတင် ၄။ သပဒါန စာရိကင်္ဂ ဓုတင် ၅။ ဧကာသနိကင်္ဂ ဓုတင် ၆။ ပတ္တပိဏ္ဍိကင်္ဂ ဓုတင် ၇။ ခလုပစ္ဆာဘတ္တကင်္ဂ ဓုတင် ၈။ အာရညိကင်္ဂ ဓုတင် ၉။ ရုက္ခမူလိကင်္ဂ ဓုတင် ၁၀။ အမ္ဘောကာသိကင်္ဂ ဓုတင် ၁၁။ သောသာနိကင်္ဂ ဓုတင် ၁၂။ ယထာသန္တတိကင်္ဂ ဓုတင် ၁၃။ နေသဇ္ဇိကင်္ဂ ဓုတင် တို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
၁။ ပံသုကူလိကင်္ဂ ဓုတင်ဆိုတာ မြန်မာလို အလွယ်ပြောရရင်တော့ ဒကာ၊ ဒကာမတို့ လှူဒါန်းသော သင်္ကန်းကို ပယ်ပြီး အများသူငါ စွန့်ပစ်ထားသော အ၀တ်အပိုင်းအစများကိုသာ ချုပ်စပ်ဝတ်ရုံ သုံးဆောင်သောအကျင့်လို့ ပြောနိုင်ပါတယ်။ ပံသုကူသင်္ကန်းကို ဆောင်လေ့ရှိတဲ့သူရဲ့ အကြောင်း၊ စေတနာကို ပံသုကူလိကင်္ဂလို့ ဆိုပါတယ်။ ပံသုဆိုတာ မြေမှုန့်ကို ဆိုပြီး ပံသုကူလိကဆိုတာ မြေမှုန့်ပေါ်မှာ လွှမ်းမိုးကျရောက်နေခြင်းလို့ ဆိုပါတယ်။ ဆိုလိုတာက လမ်းခရီးသုဿာန် အမှိုက်ပုံစတဲ့ မြေပေါ်မှာ လွှတ်ပစ်ထားတဲ့ အ၀တ်အထည်ကို ပံသုကူလလို့ ဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလို အ၀တ်သင်္ကန်းကို ဆောင်ယူလေ့ရှိတဲ့သူကို ပံသုကူလိကလို့ ခေါ်ပါတယ်။
၂။ တေစိဝရိကင်္ဂ ဓုတင်ဆိုတာ မြောက်များစွာသော သင်္ကန်းကိုပယ်ပြီး နှစ်ထပ်သင်္ကန်း၊ ကိုယ်ရုံ၊ သင်းပိုင်ဟူသော သင်္ကန်းသုံးထည်ကိုသာ သွားလေရာယူဆောင် ၀တ်ရုံသုံးဆောင်သော အကျင့်ကို ဆိုပါတယ်။ ဒုကုဋ်၊ ကိုယ်ဝတ်၊ သင်းပိုင်ဆိုတဲ့ သင်္ကန်းသုံးထည်ကိုသာ ဆောင်လေ့ရှိတဲ့အတွက် အဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ကို တေစီဝရိကလို့ခေါ်ပြီး ဒီဓုတင်ကို ဆောက်တည်ကြောင်းဖြစ်တဲ့ စေတနာကို တေစီဝရိကင်္ဂလို့ ဆိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
၃။ ပိဏ္ဍပါတိကင်္ဂ ဓုတင်ဆိုတာက့ လာဘ်ပိုလာဘ်လျှံကိုပယ်ပြီး ဆွမ်းခံ၍ရသော ဆွမ်းကိုသာ စားသောက်သုံးဆောင်သော အကျင့်ကို ဆိုပါတယ်။ သူတစ်ပါးတို့ လောင်းလှူသော ဆွမ်းအာမိသများ သပိတ်ထဲကို ရောက်လာခြင်းကို ပိဏ္ဍပါတလို့ဆိုပြီး ထိုသို့သော ဆွမ်းကိုသာ ရှာမှီးလေ့ရှိတဲ့သူကို ပိဏ္ဍပါတိကလို့ ဆိုပါတယ်။ ဒီဓုတင်အကျင့်ကို ဆောက်တည်ကြောင်း စေတနာကို ပိဏ္ဍပါတိကင်္ဂလို့ ဆိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
၄။ သပဒါနစာရိကင်္ဂ ဓုတင်ဆိုတာ အိမ်စဉ်ကျော်၍ ခံယူခြင်းကို ပယ်ပြီး အိမ်စဉ်မကျော်မလှပ် ရပ်၍ရသော ဆွမ်းကိုသာ ခံယူသုံးဆောင်သောအကျင့်ကို ဆိုပါတယ်။ အိမ်စဉ်ပြတ်ခြင်းကို ဒါနလို့ဆိုပြီး အိမ်စဉ်မပြတ်ခြင်းကို သပဒါနလို့ ဆိုပါတယ်။ အိမ်စဉ်မပြတ် လှည့်လည်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ကို သပဒါနစာရိကလို့ ဆိုပြီး ဒီအကျင့်ကို ဆောက်တည်ကြောင်း ဖြစ်တဲ့ စေတနာကိုတော့ သပဒါနစာရိကင်္ဂလို့ ဆိုပါတယ်။
၅။ ဧကာသနိကင်္ဂ ဓုတယ်ဆိုတာ နေရာအမျိုးမျိုး၌ စားခြင်းကိုပယ်ပြီး တစ်နေရာ တစ်ထိုင်တည်း၌သာ စားခြင်းပြုသော အကျင့်ကို ဆိုပါတယ်။ တစ်နေရာတည်း၌ သုံးဆောင်စားသောက်ခြင်းကို ဧကာသနဟုဆိုပြီး ထိုသို့ တစ်နေရာတည်းမှာ စားသောက်သုံးဆောင်လေ့ရှိသူကို ဧကာသနိကလို့ ဆိုပါတယ်။ ဒီအကျင့်ကို ဆောက်တည်ကြောင်း စေတနာကို ဧကာသနိကင်္ဂလို့ ဆိုပါတယ်။
၆။ ပတ္တပိဏ္ဍိကင်္ဂ ဓုတင်ဆိုတာ နှစ်ခွက်မြောက်သော ဆွမ်း၊ ဆွမ်းဟင်းကို ပယ်ပြီး တစ်ခွက်တည်းကိုသာ ခံယူသုံးဆောင်သောအကျင့်ကို ဆိုပါတယ်။ နှစ်ခုမြောက်ခွက်ကို ပယ်ပြီး တစ်ခုသော သပိတ်၊ ခွက်ထဲမှာရှိတဲ့ ဆွမ်းကို ပတ္တပိဏ္ဍလို့ ဆိုပါတယ်။ ဒီအကျင့်ကို ကျင့်တဲ့သူကို ပတ္တပိဏ္ဍိကလို့ ဆိုပြီး ဒီအကျင့်ကို ဆောက်တည်ကြောင်း စေတနာကိုတော့ ပတ္တပိဏ္ဍိကင်္ဂလို့ ဆိုပါတယ်။
၇။ ခလုပစ္ဆာဘတ္တိကင်္ဂ ဓုတင်ဆိုတာ အတိရိက်ဝိနည်းကံ ဆွမ်းကို ပယ်ပြီးဘုဉ်းပေးတဲ့ အကျင့်ကို ဆိုပါတယ်။ ခလုဆိုတာ တာမြစ်ခြင်း အနက်ကို ဟောတဲ့ ပုဒ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဆွမ်းစားနေစဉ် ကပ်လှူလာတဲ့ ဘောဇဉ်ကို တားမြစ်မိတဲ့ ရဟန်းမှာ ပ၀ါရိတ်သင့်ပါတယ်။ နောက်ရောက်လာတဲ့ ဘောဇဉ်ကို ပစ္ဆာဘတ္တိလို့ ခေါ်ပါတယ်။ ဒီပစ္ဆာဘတ္တိဘောဇဉ်ကို ၀ိနည်းကံပြုပြီး သုံးဆောင်နိုင်သော်လည်း မသုံးဆောင်ဘဲ ပယ်လေ့ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကို ခလုပစ္ဆာဘတ္တိကလို့ ဆိုပါတယ်။ ဒါကြောင့် ပ၀ါရိတ်သင့်ပြီးသော ရဟန်းဟာ အတိရိတ်ဝိနည်းကံပြုပြီး စားကောင်းသော ဘောဇဉ်ကို မစားဘဲ ပယ်လေ့ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့် ခလုပစ္ဆာဘတ္တိကမည်ကြောင်း၊ ဒီဓုတင်အကျင့်ကို ဆောက်တည်ကြောင်း စေတနာသည် ခလုပစ္ဆာဘတ္တိကင်္ဂမည်ကြောင်း ဆိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
၈။ အာရညိကင်္ဂ ဓုတင်ဆိုတာ မြို့ရွာကျောင်းကိုပယ်ပြီး တောရကျောင်း၌သာ နေသောအကျင့်ကို ဆိုပါတယ်။ တော၌နေလေ့ရှိတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ကို အာရညိကလို့ခေါ်ပြီး ဒီအကျင့်ကို ဆောက်တည်ကြောင်း စေတနာကို အာရညိကင်္ဂလို့ ခေါ်ပါတယ်။
၉။ ရုက္ခမူလိကင်္ဂ ဓုတင်ဆိုတာ အမိုးအကာရှိသော ကျောင်းကိုပယ်ပြီး သစ်ပင်ရင်း၌သာ နေသောအကျင့်ကို ဆိုပါတယ်။ သစ်ပင်ရင်း၌ နေလေ့ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကို ရုက္ခမူလိကလို့ ခေါ်ပြီး ဒီအကျင့်ကို ဆောက်တည်ကြောင်း စေတနာကိုတော့ ရုက္ခမူလိကင်္ဂလို့ ဆိုပါတယ်။
၁၀။ အဗ္ဘောကာသိကင်္ဂ ဓုတင်ဆိုတာ အမိုးအကာရှိသောကျောင်းနှင့် သစ်ပင်တို့ကိုပယ်ပြီး လွင်တီးခေါင်၌သာ နေသောအကျင့်ကို ဆိုပါတယ်။ လွင်တီးခေါင်၌ နေလေ့ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကို အဗ္ဘောကာသိကလို့ဆိုပြီး ဒီအကျင့်ကို ဆောက်တည်ကြောင်း စေတနာကို အဗ္ဘောကာသိကင်္ဂလို့ ဆိုပါတယ်။
၁၁။ သောသာနိကင်္ဂ ဓုတင်ဆိုတာ သုသာန်၌သာ နေသောအကျင့်ကို ဆိုပါတယ်။ သုဿာန်၌ နေ့လေ့ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကို သောသာနိကလို့ဆိုပြီး ဒီအကျင့်ကို ဆောက်တည်ကြောင်း စေတနာကို သောသာနိကင်္ဂလို့ ဆိုပါတယ်။
၁၂။ ယထာသန္တတိကင်္ဂ ဓုတင်ဆိုတာ နေရာကောင်း ကျောင်းကောင်းကို မရွေးခြယ်ဘဲ ဖြစ်စဉ်အတိုင်းသာ နေသောအကျင့်ကို ဆိုပါတယ်။ ကျောင်းနေရာ ညွန်ပြတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်က ဒီနေရာဟာ သင့်နေရာပဲလို့ လက်ဦးညွန်ပြတဲ့ ကျောင်းအိပ်ရာ နေရာကို ယထာသန္တတလို့ဆိုပါတယ်။ တစ်ခြား နေရာကောင်း ကျောင်းကောင်းတွေကို မရွေးချယ်ဘဲ ညွန်ပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ် ထားတဲ့အတိုင်း နေလေ့ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကို ယထာသန္တိတိကလို့ ခေါ်ပြီး ဒီအကျင့်ကို ဆောက်တည်ကြောင်း စေတနာကို ယထာသန္တတိကင်္ဂလို့ ဆိုပါတယ်။
၁၃။ နေသဇ္ဇိကင်္ဂ ဓုတင်ဆိုတာ အိပ်ခြင်းကို ပယ်ပြီး ထခြင်း၊ ထိုင်ခြင်း၊ စင်္ကြံသွားခြင်းဟူသော ဣရိယာပုတ်ဖြင့်သာ နေသောအကျင့်ကို ဆိုပါတယ်။ အိပ်ရာခေါင်းအုံးပေါ်မှာ ခေါင်းချပြီး လျောင်းစက်အိပ်ခြင်းကိုပယ်ကာ ထိုင်နေခြင်း အလေ့ရှိတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ကို နေသဇ္ဇိကလို့ ခေါ်ပြီး ဒီအကျင့်ကို ဆောက်တည်ကြောင်း စေတနာကို နေသဇ္ဇိကင်္ဂလို့ ခေါ်ပါတယ်။
ဒီဓုတင်အကျင့် (၁၃)ပါးမှာ ဘိက္ခု (ရဟန်းယောကျာ်း)များ အတွက်ကတော့ အားလုံးကျင့်သုံးနိုင်တဲ့ ဓုတင်များ ဖြစ်ပါတယ်။ အကယ်၍ လွင်တီးခေါင် အရပ်မှာ အာရညိကင်္ဂ ဓုတင်အား လျောက်ပတ်တဲ့ သုသာန်ဖြစ်ပါက တစ်နေရာတည်းနဲ့ ဓုတင် ဆယ့်သုံးမျိုးလုံးအထိ ဆောက်တည်နိုင်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဘိက္ခုနိမ (ရဟန်းမိန်းမ)များအတွက်ကတော့ ဓုတင်ဆယ့်သုံးပါးမှာ အာရညိကင်္ဂဓုတင်၊ ခလုပစ္ဆာဘတ္တိကင်္ဂဓုတင်၊ အဗ္ဘောကာသိကင်္ဂဓုတင်၊ ရုက္ခမူလိကင်္ဂဓုတင်၊ သောသနိကင်္ဂဓုတင်ဆိုတဲ့ ဓုတင်ငါးပါးမှတပါး ကျန်ဓုတင် (၈)ပါးကို ဆောက်တည်နိုင်ပါတယ်။ သာမဏေ (ကိုရင်)များကတော့ တေစီဝရိကင်္ဂဓုတင်မှ တပါး ကျန် (၁၂)ပါးကို ဆောက်တည်နိုင်ပါတယ်။ သာမဏေရီ (ကိုရင်မ)နဲ့ သိက္ခမာန်များကတော့ ဘိက္ခုနီမများ ကျင့်နိုင်တဲ့ ဓုတင် (၈)ပါးထဲမှာ တေစီဝရိကင်္ဂ ဓုတင်ကို ထပ်ပယ်ပြီး ကျန် (၇)ပါးကို ဆောက်တည်နိုင်ပါတယ်။ ဥပါသကာ (လူဒါယကာ)၊ ဥပါသိကာမ (လူဒါယိကာမ)တို့ကတော့ ပတ္တပိဏ္ဍိကင်္ဂဓုတင်နဲ့ ဧကာသနိကင်္ဂဓုတင် နှစ်ပါးကိုပဲ ဆောက်တည်ကျင့်သုံးနိုင်ပါတယ်။
တရားအားထုတ်တဲ့ ယောဂီများအနေနဲ့ အထက်မဂ်ဉာဏ်ကို ရဖို့အတွက် သီလစင်ကြယ်ဖို့ လိုပါတယ်။ ဒီသီလစင်ကြယ်ဖို့ ဆိုတာ အလိုနည်းခြင်း၊ ရောင့်ရဲခြင်းစတာတွေ ရှိမှလည်း သီလအကျင့် ဖြူစင်စေပါတယ်။ ဒီလို အလိုနည်းခြင်း၊ ရောင့်ရဲခြင်း ရှိဖို့အတွက် အလိုနည်းနိုင်၊ ရောင်ရဲ့နိုင်၊ ကိလေသာ ခေါင်းပါးနိုင်တဲ့ အကျင့်တွေဖြစ်တဲ့ ဓုတင်အကျင့်ကို ကျင့်ဖို့လိုတယ်၊ ကျင့်နိုင်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း မြတ်စွာဘုရားရှင်က ကျင့်နိုင်တဲ့သူတွေ၊ ကျင့်လိုတဲ့သူတွေ ကျင့်နိုင်အောင် ဒီဓုတင်အကျင့် ဆယ့်သုံးပါးကို ခွင့်ပြုတော် မူခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကိလေသာကို ပါးအောင်၊ နည်းအောင် လုပ်တဲ့နည်းတွေထဲမှာ ဒီဓုတင်အကျင့်နဲ့လည်း ကိလေသာနည်းအောင် ပြုလုပ်နိုင်တာ ဖြစ်တဲ့အတွက် ဓုတင်အကျင့်နဲ့ ကိလေသာကို ပယ်ခွာလိုသူများ၊ ဓုတင်အကျင့်ကို စိတ်ဝင်စားသူများ ဗဟုသုတဖြစ်စေရန်နဲ့ လက်တွေ့လိုက်နာ ကျင့်သုံးလိုကလည်း ကျင့်သုံးနိုင်စေရန် ရည်ရွယ်ပြီး ဓုတင်အကြောင်းကို တင်ပြလိုက်ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ အကျယ်လေ့လာပြီး လက်တွေ့ကျင့်ကြံလိုသူများ အနေဖြင့် ၀ိသုဒ္ဓိဂဂ် အဋ္ဌကထာ၊ ပထမအုပ်၊ ဓုတင်္ဂ နိဒ္ဒေသပိုင်းတွင် လေ့လာနိုင်ပါကြောင်း အသိပေး တင်ပြလိုက်ရပါတယ်။